အပြိုဖျေါဝငျစ – My Blog
ဒါ…မဝငျးမတေို့အိမျပါလားခငျဗြာ ဟုတျပါတယျ . ဟုတျပါတယျ .. ဘာကိစ်စရှိလို့ ပါလဲ မဝငျးမေ ကြှနျတေျာ့ကိုသိပါတယျ .. ခဏလောကျ ချေါပေးပါလားဗြာ မဝငျးမေ ခရီးထှကျနတေယျကှဲ့ ကြှနျတျောက ဦးနစေိုးသား ဇယြောစိုးပါ။ ဒီမှာငှကွေေးစာရငျးလေးတှရှေငျးဖို့ ဖဖေလှေတျလိုကျတာပါ ဒီတော့မှ အသကျငါးဆယျလောကျရှိသော ဦးလေးကွီးသညျ လှုပျလှုပျရှရှဖွဈ၍ သှားရလသေညျ။ အျော .. ဦးနစေိုးရဲ့သားကိုး .. လာလာ အိမျ ထဲဝငျ ဦးလေးတို့ကလဲ လူစိမျးဆိုတော့ ရုတျတရကျ အဝငျ မခံရဲဘူးကှဲ့ .. ဟဲ့ သမီးခငျမေ ဧညျ့သညျ အတှကျ ရနှေေး နဲ့အမဲခွောကျဖုတျလုပျပါကှဲ့ ရပါတယျ ဦးလေးရာ ကြှနျတေျာ့အတှကျ ဒုက်ခမရှာပါနဲ့ ဒါနဲ့ ဘယျမှာတညျးလဲကှဲ့ မတညျးရသေးပါဘူး ကြှနျတျောခုမှရောကျတာ ဟေ့ .. ဒါဆို ဒို့အိမျမှာဘဲနေ အိမျကလဲကယျြ တယျ။ မငျးစိတျလှတျ ကိုယျလှတျနလေို့ရပါတယျ။ တခွား သှားမတညျးရဘူးနျော ဟာ .. မဟုတျတာ အားနာစရာကွီး ကြှနျတျောအပွငျမှာဘဲ တညျးပါရစေ ဒီမှာ မငျးအဖနေဲ့ ကြုပျနဲ့က အငျမတနျရငျးနှီး တာကလား ဒီတော့ မငျးက ကြုပျစိတျမကောငျးအောငျ တော့မလုပျပါနဲ့ကှယျ။
မငျးအဖရေဲ့ ကြေးဇူးတှကေလဲ ဒို့အပျေါမှာ အမြားကွီးရှိတယျ။ ကွုံကွိုကျတုံး ပွုစုပါရစေ ကှယျ ကောငျးပါပွီ ခငျဗြာ ဒါပမေဲ့ ကြှနျတေျာ့အတှကျ တော့ ဘာမှ ထူးထူးထှထှေတှေေ မလုပျနဲ့နျော အဖိုးကွီးနှငျ့ ဇယြောစိုးတို့ စကားပွောနကွေစဉျမှာပငျ အသားလတျလတျ လူလုံးတောငျ့တောငျ့အသကျ ဆယျ့ခွောကျနှဈလောကျရှိသော ကောငျမလေးတဈယောကျ လငျဗနျးထဲတှငျ လဘကျရညျခရားနှငျ့ စားစရာမြား ထညျ့ပွီး လကျမှကိုငျကာ အဖိုးကွီးရှမှေ့ ယို့ယို့လေးဖွတျ၍ လြှောကျလာသညျ။ ပွီးတော့ ဇယြောစိုး၏ ရှတှေ့ငျ စားစရာမြား ခြ၍ ပေးလိုကျသညျ။ အဖိုးကွီးကတပွုံးပွုံးဖွငျ့ ကွညျ့နယေငျး .. ဒါ မဝငျးမရေဲ့ညီမ ခငျမဘေဲကှဲ့ မှတျထား ဒါ ညီးအကိုလိုသဘောထား တို့ဖေါကျသယျ ဦးနစေိုးရဲ့ သား ဇယြောစိုးတဲ့ နငျ့အမ မလာမခငျြး ဒို့အိမျမှာနမှော အစစ ဂရုစိုကျနျော ကလေး ကောငျမလေးက ဇယြောစိုးကို မရဲတရဲကွညျ့ရငျး ခေါငျးငွိမျ့၍ပွသညျ။ ပွီးသညျနှငျ့ ခြာကနဲလှညျ့ထှကျသှား တော့သညျ။ ဇယြောစိုးက ခငျမေ၏ နောကျပိုငျးကို အသာခိုး၍ ကွညျ့သညျ။
လုံးကဈြနသေော တငျသားလေးတှကေ မလှုပျ ခငျြလှုပျခငျြနဲ့ ခါသှားတာတှလေို့ကျရသညျ့အတှကျ ဇယြော စိုး၏ စိတျထဲ မကွမေခမျြးလေးဖွဈသှားရသညျ။ မဝငျးမကေတော့ ကွာလိမျ့မယျကှဲ့ အနဲဆုံး တပတျလောကျကွာမယျ ဘယျကိုသှားတာလဲ ဦးလေး .. ဒီလောကျတောငျကွာရအောငျ လိမ်မျောစိုကျခငျးတှေ လိုကျကွညျ့နတောကှဲ့ .. ခွံတှအေသဈတိုးထားတာရှိတယျလေ။ အဒျေါနဲ့ သှားဆိုလဲ မရဘူးကှယျ။ ပညာလေးက တတျတော့ မိဘကိုတောငျ မရို သခေငျြဘူး။ အသကျကလဲ အစိတျရှိနပွေီ အိမျထောငျပွု ပါလို့ပွောလို့လဲ မရ။ ကြုပျက စိတျမခနြိုငျဖွဈနတော။ ခကျပါ တယျကှယျ ဒီလိုလဲဘယျဟုတျမလဲ ဦးလေးရာ သူလှတျလှတျ လပျလပျနခေငျြလို့ဖွဈမှာပေါ့ အငယျမ ခငျမကေတြော့လဲ တမြိုးကှဲ့ သူ့အမလို ထကျထကျမွကျမွကျတော့မရှိဘူး အိမျထဲမှာဘဲ ကုတျနေ တယျ။ ကြောငျးနဲ့ အိမျနဲ့ဘဲ အခု ကိုးတနျးအောငျထားပွီလေ ဦးလေး ဒါနဲ့ မဝငျးမဆေီ ကြှနျတျော လိုကျသှားလို့မရဘူးလား စိုကျခငျးတှလေဲ ကွညျ့ရငျးပေါ့ .. မလှယျဘူးကှဲ့ ခရီးက သိပျကွမျးတယျ မွငျးရော စီးတတျလား။
နဲနဲပါးပါးတော့ စီးတတျပါတယျ ဦးလေးရ အေး ဒီခရီးက မွငျးနဲ့သှားရမှာ ဒီကနေ ကားတတနျ ခွကေငျြတတနျနဲ့ နောကျဆုံး မွငျးနဲ့ခရီးဆကျမှ ရောကျမှာ.. ရပါတယျ ဦးလေးရာ မဝငျးမလေို မိနျးခလေးတောငျ သှားနိုငျတာဘဲ နောကျပွီး ဗဟုသုတလဲရတာပေါ့ ဒီလိုကွီးတော့ ထိုငျစောငျ့မနခေငျြဘူး အေး ဒါဆိုလဲ ခငျမကေို လမျးပွခိုငျးမယျ သတိနဲ့ သှားကွပေါ့ ကြုပျက ကနျြးမာရေးသိပျမကောငျးလို့ နို့မို့ယငျ လိုကျပို့ပါတယျ ကှယျ မနကျဖနျ မနကျ စထှကျကွပေါ့ ဟုတျကဲ့ ဦးလေး . ခရီးတလြှောကျလုံးခြောခြောမောမော ရှိခဲ့ရသညျ။ သို့ရာတှငျ မွငျးငှားသောနရောရောကျတော့ ပထမဆုံး အ ဆငျမပွမှေုဖွငျ့ ဆုံဆညျးရသညျ။ ငှားမဲ့မွငျးက တကောငျ သာရှိသညျ။ ဇယြောစိုးက ခငျမကေို တယောကျတလဲစီးဖို့ ပွောတော့ သူက ခေါငျးငွိမျ့ရှာသညျ။ မွငျးငှားသောနရောမှာပငျ ရမေိုးခြိုး၍ စားသောကျပွီး ခရီးထောကျနားလိုကျသညျ။ ပွီးတော့မှ ခရီးဆကျ၍ထှကျရနျ ပွငျတော့သညျ။ ခငျမကေ စောစောတုံးကလို ထဘီတိုတိုဖွငျ့မဟုတျတော့ဘဲ စကပျနီညိုလေးကို ဝတျ၍ထားသညျမှာ အတျောပငျ ကွညျ့လို့ကောငျးလှသညျ။
မွငျးနဲ့ထှကျလာပွီး တနာရီလောကျလဲ လမျးလြှောကျ လိုကျရော ဇယြောစိုးတဈယောကျ အကငျြ့မရှိ၍ အတျောပငျ မော၍လာသညျ။ ဒါကိုသိသော ခငျမကေ မွငျး ပျေါမှဆငျးပေးပမေဲ့ သူမကိုလမျးလြှောကျခိုငျးပွီး မွငျးပျေါကို ဇယြောစိုးက တကျစီးရနျကိုတော့ ဇယြောစိုးက မစီးရကျ ဖွဈနရေသညျ။ သူစီး ငါစီးဖွငျ့ နောကျဆုံး နှဈယောကျစလုံး စီးဖွဈသှားကွသညျ။ ကြှမျးကငျြသူမို့ ခငျမကေ ရှစေီ့းသညျ။ ခရီးက တ ဖွေးဖွေးဖွငျ့ ကွမျး၍လာသညျ။ သဈပငျတှကေအုပျဆိုငျး၍ နပွေီးလူသှားလူလာလဲမရှိပေ။ လမျးက အရမျးလူရှငျးတယျနျော ဒါဖွတျလမျးအကိုရဲ့ လမျးကွမျးတယျ။ လူတှကေ လမျးကောငျးဘဲသှားတာမြားတယျ။ မွငျးကဘာစိတျကူးပေါကျသညျမသိ ပုံမှနျပွေးနရောမှ ကဆုနျခြ၍ပေးတော့သညျ။ အတှအေ့ကွုံမရှိသော ဇယြောစိုးက အထိတျတ လနျ့ဖွငျ့ ခငျမေ၏ ကိုယျလုံးလေးကို ဖကျ၍ထားသညျ။ အတနျကွာလို့ မွငျးကမောပွီး ရပျသှားသညျ့တိုငျအောငျ ဇယြောစိုးက သူမ၏ ကိုယျလုံးလေးကို ဖကျထားဆဲဖွဈသညျ။ ဇယြောစိုးက သတိမထားမိဘဲ ဆကျလကျ၍ ဖကျ ထားတာဖွဈပွီး။
အဖကျခံထားရသော ကောငျမလေးကတော့ ဇယြောစိုး၏ လကျတှကေို အောကျသို့တှနျး၍ ခပြေးသညျ။ သညျလိုမလုပျ၍လဲမဖွဈခြေ။ ဇယြောစိုး၏ လကျတှကေ သူမ၏ နို့အုံတှပေျေါတှငျ ဖိ၍ထားသညျ။ မွငျးနှငျ့ဆကျပွီး ခရီးနှငျလာသျောလဲ တခကျြတခကျြ ဆောငျ့လိုကျတိုငျး ဇယြောစိုး၏ လကျတှကေ သူမ၏ နို့တှကေို သှား၍ သှား၍ ထိမိသညျ။ ဇယြောစိုးသညျ သာယာ သလိုဖွဈမိခွငျးကွောငျ့လကျကို မဖယျတော့ဘဲ အသာလေး နို့ပျေါတငျထားလိုကျသညျ။ ကောငျမလေးကလဲ ဖယျမခြ တော့ခြေ။ ဇယြောစိုးက အားတကျလာပွီး အငျးကြီပါးပါးလေးပျေါက မွငျနရေသော ဘောလီလေးကိုဘဲ အားမလိုအားမရဖွငျ့ မသိမသာလေး ပှတျ၍ပေးနသေညျ။ မသိမသာဆိုပမေဲ့ ကောငျမလေးကတော့ သိပုံရ သညျ။ အသံကတော့ တခကျြမှ မထှကျ။ ထို့ကွောငျ့ပငျ ဇယြောစိုးက ရဲရဲတငျးတငျးဖွငျ့ နို့အုံလေးကို လကျဝါးနဲ့အုပျ ပွီး ညှပျပေးသောအခါ ကောငျမလေးက တခါနှဈခါတော့ ဖယျ၍ခသြညျ။ နောကျတော့ ကိုငျခှငျ့ပွုထားလိုကျသညျ။ ဇယြောစိုးက ခဏကွာ စိတျတိုငျးကြ ဖဈြညှဈပေး ပွီးတော့မှ သူမ၏ အငျးကြီအရှေ့ ကယျြသီးမြားကို ဖွုတျ၍ ခလြိုကျတော့သညျ။
အငျးကြီရငျဘတျပှငျ့သှားသညျ့အတှကျ ကောငျမလေး၏ ပုခုံးသားလတျလတျလေးမြားသညျ စောလြှငျစှာ ထှကျပျေါ၍လာသညျ။ ဇယြောစိုးက လကျတဖကျဖွငျ့ သူမ၏ခါးကို ဖကျ လြှကျ ကနျြလကျတဖကျဖွငျ့ နောကျကနေ အငျးကြီကို လှနျ ပွီး ဘျောလီအငျးကြီခြိတျကို ဖွုတျပေးလိုကျသညျ။ ဒီအခါတှငျတော့ ခငျမသေညျ တုနျတုနျရီရီလေး ဖွငျ့ဘျောလီကို ခြှတျရာမှာ လကျလေးနှဈဖကျကို တဖကျစီ မွှောကျ ပေးတာတို့ ခြိတျဖွုတျပေးတာတို့ဖွငျ့ ကူညီရှာသညျ။ ဟငျးလငျးပှငျ့သှားသညျနှငျ့ သူမရငျဘတျကို လကျနဲ့ လြှောကျပှတျရငျး နို့ကို ထိကိုငျမိတာနဲ့ ဂရုတစိုကျညငျသာစှာ နယျပေးလိုကျသညျ။ အပြိုစငျ အပြိုရိုငျးလေးမို့ ဆိုရမလား။ အခုမှ အပြိုဖျေါဝငျစဆိုတော့ တငျးပွီး ရှသေို့ခြှနျထှကျကာ အခှံမနှာ ရသေးတဲ့ ကှမျးသီးတဈလုံးစာလောကျတော့ရှိသညျ။ အပြိုကွီးတှရေဲ့ နို့နဲ့မတူဘဲ တကယျ့ကို လတျဆတျ သညျ။ အရသာပငျ ပြော့အိနတောမြိုးမဟုတျဘဲ နို့ကို ဆုတျရငျးဖွငျ့ နောကျကနဂေုတျကို နမျးစုတျပေးပါသညျ။ ဇယြော စိုးသညျ သူမ၏ ဂုတျတှငျသာမက လကျပွငျတှေ သှေးခြဥေအောငျပငျ နမျးစုပျပေးမိသညျ။
ခငျမကေတော့ မွငျးဇကျကွိုးကို နိုငျအောငျ မကိုငျနိုငျတော့ခြေ။ ငှကျဖြားတကျသလို တဆတျဆတျတုနျ၍နေ သညျ။ ဇယြောစိုးက သူမ၏ နို့သီးခေါငျးလေးတှကေိုရအောငျ ရှာပွီး လကျညှိုးလကျမကွားတှငျ ခပြေေး နမေိသညျ။ နို့လေးတှကေို မမွငျရလို့ အားမရပမေဲ့လဲ ဒီ လောကျရတာကိုပငျ ဇယြောစိုးက ကြေးဇူးတငျနမေိသညျ။ ပွီးသညျနှငျ့ သူမ၏ ဝမျးဘိုကျသားလေးကို ရှပျကိုငျ၍ မထိတထိလေး ဖဈြ၍ပေးတော့ရာ ကောငျမလေး တကိုယျလုံး ကွကျသီးမှေးညှငျးတှထေ၍လာရသညျ။ လကျက တစထကျ တစ အောကျကိုဆငျးသှားရငျး သူမ၏ စကပျခြိတျလေးကို ဖွုတျကာ စောကျပတျလေးဆီသို့ လှမျးလိုကျသညျ။ အမှေးလေးတှကေ ပေါကျကာစ နုနုတိုတိုလေးတှဖွေဈသညျ။ စကပျအောကျမှာ ဘာမှ ဝတျမထားတော့ ဇယြောစိုးသညျ သူမ၏ စောကျပတျ အကှဲကွောငျးကို လကျဖွငျ့ အသာလေးလြှောကျ၍ ဆှဲနသေညျ။ ပွီးတော့မှ စောကျဖုတျလေးကို လကျမလကျခလယျတို့ဖွငျ့ ဟလိုကျရငျး လကျညှိုးကို အသာလေး သှငျးပေးလိုကျသညျ။ သူမ၏ စောကျခေါငျးလေးသညျ ခွောကျသှေ့၍ ကပျနသေညျ။
ထို့ကွောငျ့ ဇယြောစိုးက သူမ၏ စောကျစလေ့ေးကို ရှာပွီးကလိပေးတော့မှ အရညျလေးတှေ တစိမျ့စိမျ့ဆငျး လာသညျ။ ကောငျမလေးကတော့ ရှကျလို့လားမသိ ခေါငျးငုံ့ရငျး မွငျးကိုသာ ဇှတျနှငျ၍နသေညျ။ လကျလဲဝငျလို့ရရော ဇယြောစိုးက စောကျခေါငျး ကဉျြးကဉျြးလေးထဲသို့ သူ၏ လကျညှိုးကို သှငျးလိုကျထုတျ လိုကျဖွငျ့လုပျ၍ပေးနသေညျ။ နာရငျလနျ့သှားပွီ မကောငျး တာကွောငျ့ ဖွေးဖွေးလေး မှေ၍ပေးနမေိသညျ။ သူမ၏စောကျစလေ့ေးကတော့ စောကျဖုတျအပွငျကိုပငျ လကျတဆဈလောကျစှနျးထှကျ၍နသေညျ။ ဇယြောစိုးက လကျနဲ့ကလိပေးတာ ကွာလာတော့ ကောငျမလေးက သိပျပွီးအားရဟနျမတူတော့ခြေ။ မပီမသ လညျခြောငျးသံလေးတှေ ထှကျလို့လာသညျ။ စကားတော့ သိပျပွီးပွောရဲပုံမရသေးခြေ။ ဇယြော စိုးသညျ သူမ၏ ဖငျလုံးလုံး ကဈြကဈြလေးကို အောကျကနေ နှိုကျပွီး ဆုတျနယျပေးနမေိသညျ။ တျောတျောလေးကွာ သှားပွီးမှ .. ညီမ မွငျးကို ခဏရပျလိုကျ သူမက မွငျးကိုရပျလိုကျလြှငျ ဇယြောစိုးက မွငျး ပျေါမှ ခုခနျ၍ဆငျးလိုကျပွီး သူမကိုပါ မွငျးပျေါမှ ပှေ့၍ ခြ လိုကျရာ။
အားလှနျပွီး မွပွေငျပျေါသို့ နှဈယောကျသား ဖငျ ထိုငျရကျကသြှားကွလသေညျ။ မွပွေငျပျေါသို့ရောကျသညျနှငျ့ ဇယြောစိုးက ခကျြ ခွငျးပငျ သူမကို မကျြနှာခငျြးဆိုငျ ဆှဲ၍လှဲ့လိုကျသညျ။ ကောငျမလေးက သူ့ကိုမကွညျ့ရဲဘဲ မကျြနှာလေးကို ငုံ့၍ ထားသဖွငျ့ ဇယြောစိုးသညျ သူမ၏ မကျြနှာလေးကို ဆှဲ၍ မော့လိုကျကာ သူမ၏ နှုတျခမျးဖူးဖူးလေးကို ယုယုယယ လေး စုပျပေးလိုကျသညျ။ သူမ၏ နှုတျခမျးလေးမြားသညျ လတေိုးခံရသောနှငျးဆီပှငျ့ခပျြမြားနှယျ တဆတျဆတျတုနျ၍နသေညျ။ သူမကို အနမျးဖွငျ့ ညှို့ယူနတေုံးမှာပငျ ဇယြောစိုး၏ လကျတဖကျက ဘောငျးဘီဇဈကိုဖွုတျပွီး အပွငျမထှကျရသဖွငျ့ ဒေါသတကွီးပါးပဉျြးထောငျနသေော လီးကွီးကို ဂုတျကနကေိုငျပွီး ဆှဲထုတျလိုကျသညျ။လီးကွီးသညျ ခဈြခဈြ တောကျပူနှေးနပွေီး တဆတျဆတျတုနျ၍နသေညျ။ မွကွေီးပျေါတှငျ မကျြနှာခငျြးဆိုငျ ထိုငျနလြှေကျ မှ ဇယြောစိုးက သူ၏ ခွထေောကျနှဈဖကျကို ကောငျမလေး အား ခှ၍ ကားကာ ဆနျ့တနျးလိုကျသညျ။ ပွီးတော့ ကောငျ မလေး၏ ပေါငျနှဈလုံးကိုလညျး သူ၏ပေါငျရငျးတှငျ တဖကျ တခကျြဆနျ့တနျး၍တငျကာ သူ၏ခါးကို ခှစလေိုကျသညျ။
ထို့နောကျ ကောငျမလေးကို ခါးမှဆှဲယူကာ သူမ၏ စောကျပတျဝကဉျြးကဉျြးလေးထဲသို့ လီးထိပျဖူးကို အသာ လေး ထိုးထဲ့လိုကျသညျ။ ကောငျမလေး၏ မကျြနှာတဈခကျြမဲ့၍ သှားသညျ။ သိပျတော့ မလှယျလှခြေ။ ညိမ ..အကို့ကိုဖကျ .. မရှကျပါနဲ့ကှယျ သူမကဇယြောစိုး၏ ပုခုံးပျေါမေးတငျရငျး ရှရှလေး ဖကျထားလိုကျသညျ။ ဇယြောစိုးက ကောငျမလေး၏ တငျသားနှဈလုံးကို စုံကိုငျကာ မလိုကျပွီး သူ၏ ကာထာသော ခွနှေဈဖကျကို စုလိုကျကာ ကောငျမလေး၏ တငျသားမြားကို သူ၏ ပေါငျပျေါတှငျတငျပေးလိုကျသညျ။ ထိုအခါတှငျတော့ ခွဆေငျး၍ ထိုငျနတေော့ ဇယြော စိုး၏ပေါငျရငျးတှငျ ခငျမကေ ဇယြောစိုး၏ ကိုယျကို ခွနှေဈ ဖကျဖွငျ့ ခှ၍ထိုငျထားသော အနအေထားသို့ ရောကျသှား သညျ။ သူမ၏ စကပျလေးကို လှနျ၍ စောကျဖုတျကိုလကျဖွငျ့ နှိုကျကွညျ့လိုကျတော့ ရှဲ၍နသေညျ။ လီးကို စောကျ ပတျဝတှငျတေ့၍ သူမ၏ ခါးကို ဖိခလြိုကျသညျ။ ဗွဈ .. ဗွဈ. ဗွဈ.. ဖေါကျ .. ဒုတျ .. အ .. အ .. အား .. စောကျခေါငျးထဲသို့ လီးကမဆနျ့မပွဲ ဝငျသှားပွီး အပြိုမှေးကို ဖေါကျသံနဲ့သားအိမျကို ထိသံတို့သညျ အစဉျအတိုငျးထှကျပျေါ၍လာသညျ။
ခငျမကေ ပထမ အ .. အ .. နဲ့ ကွိတျမှိတျပွီးခံနပေမေဲ့ အပြိုမွှေးပေါကျပွီး သားအိမျကိုလဲ ထိရော ငယျသံ ပါအောငျအျောလိုကျတော့သညျ။ သူမသညျဇယြောစိုးကို အတငျးပငျ တှနျးသညျ။ မရပါ။ ဇယြောစိုးက သူမ၏ ခါးလေးကို အသဖေကျ၍ ထားသညျ။ ဇယြောစိုးက သူ၏ခါးကို ယူကာ သူမ၏ ခါးလေး ကို ဆှဲရငျး ညငျသာစှာဖွငျ့သူ၏ လီးကွီးမြားကို အသှငျး အထုတျလုပျကာ လိုးပေးသညျ။ တခကျြတခကျြ ခပျနာနာ လေးဆောငျ့လိုကျသေးသညျ။စှပျ.. ဒုတျ.. အား .. အား .. ဒုတျ .. အ . အာ့ .. ဇယြောစိုးက ကွမျးတခါ ခြော့တလှညျ့ တလှညျ့ ဖွငျ့ ဆကျတိုကျလိုးပေးလိုကျတော့ သူမ၏ စောကျခေါငျးက ကဉျြးလှနျးသဖွငျ့ လီးကိုလကျနဲ့ညှဈပွီး ဆုတျထားသလို ဖွဈတာကွောငျ့ ဆယျမိနဈအကွာလောကျမှာပငျ လီးကွီး သညျ တဇတျဇတျတုနျလာပွီး ခငျမေ၏ စောကျခေါငျးထဲသို့ သုတျရညျမြားကို ပနျး၍ထညျ့လိုကျလတေော့သညျ။ နှဈ ယောကျစလုံး၏ ပေါငျခွံမြားတှငျတော့ သှေးတှကေ ခငျြး ခငျြးနီရဲနသေညျ။ ကောငျမလေးခမြာမှာတော့ ငယျသေး သညျ့အတှကျ ပွီးလို့ပွီးမှနျးမသိ။ နုံးခှသှေားတာကိုဘဲ သိလိုကျ သညျ။
အရညျတှေ ပနျးထှကျကုနျတာကိုလဲ သူမကိုယျသူမ မသိခြေ။ အောကျဆုံးတော့ မကျြရညျလညျရှဲဖွငျ့ ဇယြောစိုး ကို အတငျးကွုံး၍ဖကျပွီး နမျးပါတော့လသေညျ။ ဒီနရောမှနောကျထပျ နာရီဝကျလောကျ နားပွီးတော့မှ ဆကျ၍ ခရီးနှငျခဲ့လသေညျ။ ဇယြောစိုးနှငျ့ ခငျမတေို့သညျ ဆကျ၍ခရီးနှငျလာ ကွရငျး စမျးခြောငျးလေးတခုကိုတှေ့၍ နှဈယောကျသား ဆငျးပွီးကိုယျလကျသုတျသငျကွသညျ။ တယောကျနှငျ့တယောကျ စကားတော့ မပွောဖွဈခြေ။ ခငျမကေ ရှကျနပေုံရသညျ။ ဇယြောစိုးသညျလဲ အတှေ့ အကွုံသဈကွောငျ့ နုံးခြိ၍နသေညျ။ အေးမွသော ရတှေငျ ထိနှဈ၍ခြိုးလိုကျကွတော့ နှဈယောကျစလုံးလနျး၍ သှားသညျ။ ပွီးမှ နှဈယောကျသား ခရီးဆကျခဲ့ကွသညျ။ ညနေ လဲအတျောစောငျးသှားပွီဖွဈသညျ။ ဤကဲ့သို့ တဖွေးဖွေးခရီးထှကျခှာ၍ လာရာ ခဏမြှ ကွာတော့ သူတို့၏ ရှနေ့ားမှ မွငျးခှာသံကွားရသညျ။ မှောငျ စပြိုးနပွေီဆိုတော့ ဘာမှသဲသဲကှဲကှဲ မမွငျရခြေ။ ဝါးတရိုကျ လောကျ ကှာတော့မှ ခငျမကေ ဇယြောစိုးဖကျသို့ လှမျးရငျး ပွောလိုကျသညျ။
မမလာနပွေီ .. ရှငျတော့ ကံကောငျးတာဘဲ ဟယျ ညီမလေး .. ဘယျကိုသှားမလို့လဲ .. မဝငျးမကေ ဇယြောစိုးဖကျသို့ မကျြလုံးကစားရငျးမေးလိုကျသညျ။ မမဆီလာတာပေါ့ ဟောဒီက ကိုဇယြောစိုးက မမ နဲ့တှခေ့ငျြတယျဆိုလို့ သူက ဦးနစေိုးရဲ့သားပေါ့။ မမ မှတျမိရဲ့လား ငယျငယျတုံးကတော့ တှဖေူ့းတယျလို့ အဖကေ ပွောတယျ အျော ကိုဇယြောစိုးလား ငယျရုပျတော့ နဲနဲ ကနျြ သေးတာဘဲ ဒါပမေဲ့ မပွောရငျ မှတျမိမယျမထငျဘူး တှရေ့တာ ဝမျးသာပါတယျဗြာ .. ကြှနျတျောလဲ မဝငျးမကေို အိမျက ထိုငျပွီး စောငျ့မနခေငျြတာနဲ့ စိုကျခငျး လဲကွညျ့ရအောငျဆိုပွီး လိုကျလာတာပါ စိုကျခငျးကတော့ အားလုံးအိုကပေါဘဲ .. မအိုကတောက အလုပျသမားတှဘေဲ။ လခတိုးတောငျးနကွေ တယျ .. အငျးလေ .. ကွညျ့လုပျကွတာပေါ့ .. ဒါနဲ့ မဝငျးမေ ဘယျသှားမလို့လဲ အိမျပွနျမလို့လေ .. ဘာမှ လုပျစရာမရှိတော့ ဘူးရှငျ့ .. ဒါဆိုလဲ ကြှနျတျောတို့ပါ ပွနျလိုကျခဲ့မယျ။ အဓိက ကတော့ မဝငျးမနေဲ့ တှဖေို့ပါဘဲ။ နောကျကွုံတော့မှဘဲ စိုကျခငျးတှကွေညျ့တော့မယျ။ အခုမိုးခြုပျနတေော့ ခရီးဆကျ လို့ဖွဈပါ့မလား။
ကမြတို့ကတော့ သှားနကေဘြဲ ဒါဆိုလဲ သှားကွတာပေါ့ .. ညီမလေး မမ စကားပွောရငျးနဲ့ လယျဂြာစာအုပျ တှေ မကေ့နျြခဲ့တာ သတိရတယျ။ သှားယူလိုကျပါကှယျ နျော မမတို့ ခရီးဆကျနှငျ့မယျ အလုပျတှအေမြားကွီးရှိသေးတယျ မဟုတျလား .. ဟငျ .. မမကလဲ အဝေးကွီးသှားရမှာ မသှားခငျြပါဘူး .. သှားပါကှယျ ငါ့ညီမက လိမ်မာပါတယျမမ မုနျ့ဖိုးပေးမယျ ဟုတျလား .. နျော .. ညီမ .. ခြာတိတျမသညျ ဇယြောစိုးကို စူးကနဲ တဈခကျြ ကွညျ့ရငျး မွငျးကို ခြာကနဲ လှဲ့ကာ မသှားခငျြသှားခငျြဖွငျ့ ထှကျခှာသှားပါတော့လသေညျ။ ဒီညမ တဈယောကျရှိလို့သာ ကမြသကျသာတာ နို့မို့ယငျတော့ သမှောဘဲ အလုပျတှကေ မြားတော့ တယောကျထဲ မနိုငျဘူးရှငျ့ .. ခငျဗြားတို့က မိသားစု သိုကျသိုကျဝနျးဝနျးရှိတော့ ပြျောစရာဗြာ ကြှနျတျောအားကတြယျကနြျောကတော့ တဦး တညျးသောသားမို့ အထီးကနျြသလိုပါဘဲဗြာ ကဲ..ခရီးဆကျကွစို့ ဇယြောစိုးနှငျ့ မဝငျးမတေို့သညျ စကားတပွောပွော ဖွငျ့ ခရီးဆကျခဲ့ကွရာ စောစောကဇယြောစိုးနှငျ့ ခငျမတေို့ ခရီးတဈထောကျနားသော စမျးခြောငျးလေးနားသို့ ရောကျ ခဲ့လသေညျ။
ဒီမှာ ခဏနားရအောငျ ကိုဇယြောစိုး .. ကမြမွငျးလဲမောနပွေီ ကောငျးတာပေါ့ဗြာ .. ကြှနျတျောလဲ မွငျးစီးရာပငျပနျးနပွေီ ဇယြောစိုးသညျ မွငျးပျေါမှ ဆငျး၍ မကျြခငျးပျေါအသာလဲလြှောငျးလိုကျသညျ။ လကထိနျထိနျသာနသေညျ။ နခေ့ငျးနလေ့ညျ အ တိုငျးပငျ လငျးထိနျ၍နသေညျ။ စမျးခြောငျးလေးကလဲ တ သှငျသှငျစီးဆငျး၍နသေညျ။ စမျးခြောငျးလေး၏ တဖကျတခကျြ ဝဲယာတဈလြှောကျမှာလဲ နှဈခြို့သဈပငျကွီးတှကေ စမျး ခြောငျးလေး ကမျးနဖူးနှငျ့ ပမျြးမြှ ဆယျပေ ဆယျ့ငါးပေ၊ ပနှေဈဆယျလောကျတို့တှငျ အုံ့ဆိုငျးစှာဖွငျ့ ပေါကျ၍နသေညျ။ လကေလဲ တဖွူးဖွူးတိုကျနတေော့ ဒီနရောလေးသညျ အတျောပငျ သာယာလှပသေညျ။ ဇယြောစိုးတဈယောကျ ပတျဝနျးကငျြ၏ သာယာမှုကိုခံစားနစေဉျမှာပငျ သူ၏ခေါငျးတဲ့တဲ့တှငျ မဝငျးမကေ မတျတပျရပျ၍လာသညျ။ ဇယြောစိုးက အောကျကနေ ပငျ့ကွညျ့ လိုကျတော့ သူမက ထိုးထိုးထောငျထောငျဖွငျ့ ဖွဈနသေညျ။ သူမ၏ရှရေငျအစုံသညျလညျး အောကျခံပါဟနျမတူကွောငျး သတိထားမိလိုကျသညျ။ သူမ၏ ပေါငျတံကွီးတှကေလဲ တုတျ တုတျခိုငျခိုငျဖွငျ့ ဖွဈကာ။
စောစောက မွငျးကုနျးနှီးမှာ ခြိတျ ထားသော အထုတျတထုတျကို သူမ၏ လကျတဖကျဖွငျ့ ဆှဲ ထားသညျကိုတှလေို့ကျရသညျ။ ကိုဇယြောစိုး ဘိုကျမဆာဘူးလား ကမြတော့ ဆာရငျစားဖို့ ခေါပုတျတှယေူလာတယျ။ စားဖူးတယျမဟုတျလား ရော့သကွားနဲ့ တို့စား စားမိယငျစှဲသှားတာခညျြးဘဲ ကောငျးတယျ မဟုတျလား မဝငျးမသေညျ ပွောပွောဆိုဆို ခေါပုတျထုတျကို ဘေးသို့ခလြိုကျပွီး သူမသညျ မွကျခငျးပျေါလှဲ၍ ခလြိုကျသညျ။ နှဈဦးသား စကားမပွောမိကွတော့ခြေ။ ဒါပမေဲ့ ခဏနတေော့ ပလုတျပလောငျး စားနတောကို ရပျလိုကျပွီး .. ကိုဇယြောစိုး ရှငျနျော တခြိနျကရြငျ ဒီတောအုပျ ထဲမှာ ကမြနဲ့ နှဈယောကျထဲနခေဲ့ပွီး ဘာမှ အကြိုးအမွတျ မရှိဘဲ အခြိနျကုနျပွီး ပွနျသှားရတာလို့ တှေးပွီး နောငျတရနခေငျြသလား အို ဘယျရခငျြပါ့မလဲဗြာ .. ဇယြောစိုးက ပွောလိုကျရငျး ငေါကျကနဲထထိုငျ ကာ သူမကို စိုကျ၍ကွညျ့မိသညျ။ မဝငျးမကေ တဈခကျြပွုံးလိုကျရငျး .. ရှငျ စိတျဝငျစားရငျ အဝတျအစားတှေ ခြှတျလိုကျ ပါ။ ကမြလဲခြှတျလိုကျမယျ။ တဈခုတော့ရှိတယျ ရှငျကမြကို အထငျတော့မသေးလိုကျနဲ့။
ကမြက ပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျးသမား နောကျပွီး ခတျေပညာတတျတဈယောကျ။ ကမြက ယောကျြားတှကွေားမှာ ယောကျြားတှနေဲ့ ယှဉျပွီးလုပျနရေတာ။ ရှငျ့ကို မွငျမွငျခငျြးဘဲ ကမြစိတျထဲမှာ ဆန်ဒတှေ တားဆီးလို့ မရတော့ဘူး။ ဒါကွောငျ့ ညီမလေးကို ပထုတျ လိုကျတာ ရှငျသဘောမတူလဲကမြကတော့ အတငျးကွံမလို့ဘဲ အခုတော့ အဆငျပွသှေားတာပေါ့ မဝငျးမသေညျ စကားလဲပွော အငျးကြီကို ကယျြသီး တှဖွေုတျပွီး ခြှတျခလြိုကျသညျ။ သူမ၏ ညီမလို မဟုတျဘဲ အသားရကေ နီစပျစပျဖွငျ့ဖွဈသညျ။ မို့မို့တငျးတငျးဖွငျ့ နို့နှဈလုံးဟာလဲ လရဲ့အလငျးရောငျကွောငျ့ တောကျပဝငျးပွောငျ၍နသေညျ။ နို့သီးခေါငျး တှကေ လကျသနျးတဆဈလောကျရှိပွီး အောကျကို ငိုကျ၍ နသေညျ။ နို့သီးခေါငျးလေးတှကေ ညိုရောငျသနျးနသေညျ။ ပိတုနျးနှဈကောငျ ကွာငုံပျေါနားနသေလိုပငျဖွဈသညျ။ ဇယြောစိုးက တုနျတုနျယငျယငျနဲ့ သူ၏ ကိုယျပျေါ မှ အငျးကြီတှေ ခြှတျခလြိုကျတော့ ကွှကျသားအဖုအထဈ မြားဖွငျ့ ဇယြောစိုး၏ ကိုယျလုံးကွီးကို အာသာငမျးငမျးဖွငျ့ သခြောစိုကျကွညျ့နယေငျး သူမ၏ ဘောငျးဘီခြိတျကို ဖွုတျ ကာ ဇဈကိုဆှဲ၍ခလြိုကျသညျ။
ဟ သှားသော ဘောငျးဘီဇဈကွားမှ သနျမာသောစောကျမှေးမဲမဲမြားသညျအခှလေိုကျ ထှကျပျေါ၍လာသညျ။ မဝငျးမကေတော့ ခပျစောစောပငျ ဘောငျးဘီကို ဆှဲ၍ ခြှတျခြ လိုကျသညျ။ အတှငျးခံဝတျမထားသောကွောငျ့ ဘောငျးဘီ ကြှတျထှကျသှားလြှငျပငျ သူမ၏ တကိုယျလုံးသညျ ဝတျလဈစလဈဖွဈ၍သှားရလသေညျ။ ကွီးမားတောငျ့တငျးပွီး ဖွောငျ့စငျးလှသော သူမ၏ ပေါငျတံကွီးမြားက လရောငျအောကျတှငျ ပုဇှနျဆီရောငျ ထ၍နသေညျ။ သူမခြှတျပွီးသှားသညျနှငျ့ ဇယြောစိုးဆီသို့ လှလှပပလှမျး၍လာပွီး ဘောငျးဘီကို ဝိုငျး၍ခြှတျပေးသညျ။ ဇယြောစိုးက သူမ၏ နို့သီးတှကို လှမျးပွီး ဆုတျကိုငျလိုကျသညျ။ ပြော့အိနှေးထှေးလှသော အထိအတှကွေ့ောငျ့ ဇယြောစိုး၏ တကိုယျလုံး တရှိနျးရှိနျးနဲ့ ရမကျခိုးတှေ တကျလာတော့သညျ။ ဇယြောစိုးနှငျ့ မဝငျးမတေို့သညျ မတျတပျရပျလြှကျမှ တယောကျကိုတဈယောကျဖကျကာ မကျြခငျးပျေါသို့ ထိုငျခြ လိုကျကွသညျ။ ဇယြောစိုး၏ နှုတျခမျးတှကေ မဝငျးမေ၏ နှုတျခမျးမြားကိုမော့၍ စုပျနမျးလိုကျခြိနျမှာတော့ ခကျြခွငျး ပငျ မဝငျးမကေ တုံ့ပွနျကာ ဇယြောစိုး၏ နှုတျခမျးမြားကိုပွနျလှနျ၍ စုပျနမျးပေးလသေညျ။
ရမကျဇောတှတေကျနသေော ကမြတို့နှဈယောကျ မွကျခငျးပျေါကို အကနြပငျ ယှဉျတှဲ၍ လှဲခလြိုကျမိပါတယျ။ ကမြတို့နှဈယောကျဟာ ရငျခငျြးအပျရကျ ဆီးစပျခငျြးထိရကျ ပေါငျခငျြးထိရကျဖွဈပါတယျ။ ဇယြောစိုးဟာ ကမြရဲ့ ကော့ထောငျနတေဲ့ နို့သီး ခေါငျးလေးကို ပါးစပျနဲ့ ငုံပွီး စို့ပေးတယျ။ တျောတျောသနျ တဲ့ လူဘဲရှငျ။ အိုး .. ဟငျ့ ..အငျ့ .. ကိုစိုး .. ကိုစိုး .. အို ကိုစိုး ..ရယျ စို့စမျးပါ .. ကမြနို့သီးကို ကောငျး ကောငျးစို့ပေးစမျးပါ။ ဟငျးဟငျး ကောငျးတယျ .. ကောငျး တယျ .. နို့စို့ပေးတာ သိပျခံလို့ ကောငျးတာဘဲ .. ဟငျ့.. ဟငျ့ .. ဟငျ့ .. သူကနို့စို့ပေးရုံတငျမဟုတျဘဲ နို့သီးတဝိုကျကိုလဲလြှာနဲ့ ဝိုကျဝိုကျပွီး ရကျပေးလိုကျသေးတယျ။ အဲဒီလိုရကျလိုကျတဲ့အခါမြား ကမြဟာ မကျြခငျြးပျေါကနေ ကော့ပြံကွှတကျသှားရတာဘဲ စိတျတှကေလဲ အရမျးကို ထကွှလို့ရှလာရပါတယျ။ နို့သီးနှဈခုကို တလှညျ့စီစို့ပေး ရကျပေးပွီးတဲ့ နောကျ ဇယြောစိုးရဲ့ ပါးစပျဟာ အောကျဖကျကို တစတစ ရှေ့ လြှားလာပါတယျ။ ကမြရဲ့ ဗိုကျသားပြော့ပြော့ အိအိ ခပျြ ခပျြလေးတဈလြှောကျအသာရကျပေး စုပျပေးရငျး ရှလြေှ့ား လာလိုကျတာ။
ကမြရဲ့ ဘိုကျသားပွငျလေးပျေါမှာ သူရကျ ပေးထားလို့ တံတှေးလေးတှနေဲ့ ပွောငျလကျလို့နပေါတယျ။ တဖွေးဖွေးအောကျဖကျကို ရှဆေ့ငျးလာတဲ့ ဇယြော စိုးရဲ့ပါးစပျဟာ ကမြရဲ့ခကျြပျေါကနေ ဆီးခုနျဖကျကို ရှေ့ ဆငျးသှားပွီး တဖွေးဖွေး သူ့ပါးစပျဟာ ကမြရဲ့ စောကျဖုတျ နဲ့ နီးသထကျနီးစပျလာရပါပွီရှငျ။ ကမြဟာ အလိုးခံရတာကို သဘောကသြလို စောကျပတျရကျပေးတာကိုလဲ အရမျးကွိုကျပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ အား .. ဟငျးဟငျး .. ကိုစိုးရာ ဟုတျပွီ .. ဟုတျပွီ .. ဟငျးဟငျး .. ကမြစိတျတှေ အ၇မျးထလာ ပွီ နျော .. အို အို. ရကျ .. ရကျပါတော့ .. ကမြ စောကျ ဖုတျကို ထိုးထဲ့ပွီး ရကျလိုကျစမျးပါ ဆီးစပျတဈလြှောကျ တဖွေးဖွေး ရှဆေ့ငျးလာနတောကို မစောငျ့နိုငျတော့ဘဲ ကမြက အငမျးမရ ထုတျဖျေါ ပွောလိုကျပါတော့တယျ။ အဲဒီလိုပွောလိုကျတဲ့အခိုကျမှာဘဲ ကမြရဲ့ စောကျ ပတျထဲက အရညျကွညျတှကေ အတျောကွီးကို စိမျ့ထှကျ လာပါတယျရှငျ။ ဘယျလောကျမြားသလဲဆိုရငျ အရညျတခြို့ ဟာ အပွငျလြှံထှကျပွီး ဖငျခေါငျးတဈလြှောကျ စီးကသြှားတဲ့ အထိပါဘဲရှငျ။
ဟော .. သူ့ပါးစပျက ကမြစောကျပတျနားကို ရောကျလာပွီး ရကျတော့ရကျမပေးသေးပါဘူး .. ကမြဟာ သူ့ပါးစပျနဲ့ ကမြစောကျပတျ ထိမိ အောငျ ဖငျကွီးကို ကော့ကော့ပေးမိတယျ။ အလိုးခံရတဲ့ အခါ လုပျ ပေးသလိုမြိုးပေါ့ ။ ကမြရဲ့စောကျဖုတျဟာ ဖေါငျးပွီး စောကျစလေ့ေး လဲမာကွောထောငျကွှလို့တကျနပေါပွီ။ အရမျး အရမျး ခံခငျြ နတော။ အစုပျခံခငျြနတော။ ဟုတျတယျ မနနေိုငျတော့ဘူး။ ရကျပေးပါ ကိုစိုးရယျ ကမြစောကျဖုတျကို ကောငျးကောငျးရကျပေးစမျးပါရှငျ။ ကမြ မနနေိုငျလှနျးလို့ပါကမြက ထပျပွီး လျောဆျောတိုကျတှနျးလိုကျမိ ပွနျ ပါတယျ။ ဇယြောစိုးကတော့ တကယျပါဘဲရှငျ။ မရကျခငျ အဖုတျကို အရငျဖွဲကွညျ့နတေော့တယျ။ အဖုတျနှုတျခမျးကို လကျခြောငျးတှနေဲ့ ကကြနြနကိုငျပွီး အသအေခြာကို ဖွဲ ကွညျ့နတေယျ။ ကမြစောကျဖုတျဟာ နီရဲပွဲအာပွီးနမှောပါ ဘဲ ..။ ကိုယျ့ပေါငျကွားကိုယျ ငုံ့မကွညျ့နိုငျတာကွောငျ့ အဖုတျရဲ့အနအေထား ဘယျလိုလဲဆိုတာကိုတော့ ကမြ အသအေခြာ မသိဘူးပေါ့ရှငျ။ စိတျကူးနဲ့ဘဲ မှနျးဆကွညျ့ရတာပါ။ အဲသလိုဖွဲကွညျ့ပွီးမှ သူ့ပါးစပျကို စောကျပတျပျေါ ကကြနြနအုပျပွီး မရှံမရှာစုပျနမျးတယျ။
အောငျမလေး ..လေး .. ကိုစိုးရဲ့ ကမြလေ တကိုယျလုံးကို တုနျသှားရပွီး ငယျသံပါ အောငျအျောပဈလိုကျမိပါတယျ။ ကောငျးလိုကျတာလဲ မပွောပါနဲ့တော့ ဘယျနဲ့ စောကျဖုတျကို ပါးစပျနဲ့တကေ့ပျပွီး နှုတျခမျးခငျြးစုပျသလိုမြိုး စုပျပေးတာကို သူ့ရှာကလညျး အဖုတျထဲကို ထိုးထဲ့ပွီး လှညျ့ ပတျကလိပေးသညျ။ ရကျပေးသညျ။ ကမြ အသကျရှူပွငျးတှေ ပွငျးလာတယျ။ ကမြရဲ့ ဝမျးပဉျြးသားပြော့ပြော့အိအိလေးဟာ ပိနျလိုကျ ဖေါငျးလိုကျ ကိုဖွဈလို့ ပေါငျကွီးနှဈခြောငျးလဲ ကားလိုကျ စုလိုကျနဲ့ဖွဈ နရေတယျ။ သူက ကမြစောကျပတျမှာ စိုရှဲနတေဲ့ စောကျရညျ ကွညျတှကေို လြှာနဲ့ တပွတျပွတျမွညျအောငျ ရကျပေးနေ ပွနျတယျ။ တကယျ့ကို ရကျရကျရောရော ရပျပေးနတော ကမြအဖို့ အရမျးကိုငွိမျပွီး အရမျးကို ကောငျးနရေတာပါဘဲ။ အဖုတျကိုရကျပေး စုပျပေးတာထကျ ပိုထိတာပေါ့ စောကျပတျထဲကို လြှာကိုထိုးထိုးပွီး လိုးနတေဲ့သဘော ဖွဈ နတောကိုး ..။ အား ပါးပါး ဟငျး .. ထိုးစမျးပါ ကိုစိုးရ ဟငျ့ မှပေေးစမျးပါ .. အား ကောငျးလိုကျတာ ဟငျးဟငျး .. ကမြ စောကျပတျထဲကို ရှငျ့လြှာကွီး အကုနျဝငျအောငျ ထိုး သှငျးပေးစမျးပါ။
အား .. ကောငျးလှခညျြလား ကိုစိုးရာ အမလေးလေး .. ဟုတျပီ ..ထိုး ထိုး လိုးလိုး..ရှာထိုးပေးစမျးပါ ကမြ ပါးစပျကလဲမရှကျနိုငျတော့ဘဲ တဈတဈခှခှ ကွီးကို ပွောလိုကျမိသညျ။ သူကလညျး ကမြစောကျပတျကို ရှာနဲ့ အပီထိုးထိုး ပွီး ကကြနြနကို လိုးပေးနတော အဖုတျထဲ သူ့လြှာတဈဆုံး တိုငျ တိုးဝငျလာတဲ့အခါမြား ကမြဟာ လညျခြောငျးထဲက ပါ တအငျအငျ အသံတှေ ထှကျလာတဲ့အထိဖွဈရပါတယျ။ ကမြ တကိုယျလုံးမှာ ရှိသမြှအကွောအခငျြအားလုံးမှာ သှေးတိုးအရမျးမွနျကုနျပွီး ရငျတှေ တဒိနျးဒိနျး ခုနျနတေယျ။ တကိုယျလုံး ငဖယျပြံသလို ကော့ပြံလို့ အကွီးအ ကယျြကို ပွီးလုနီးလာမှနျး ကမြရိပျမိတယျ။ ကမြစောကျပတျထဲကို ရကျပေး လြှာနဲ့ အဖုတျ ခေါငျးထဲကို ထိုးပေးလုပျနတေဲ့ အခြိနျမှာ ကမြက သူ့လီးကွီးကို ညာလကျနဲ့ လှမျးဆုတျလိုကျပွီး ဂှငျးတိုကျသလိုမြိုး ပှတျ ပေးနမေိပါတယျ။ လကျထဲမှ တဆုတျတခဲကွီး ဖွဈနတေဲ့ သူ့လီးခြောငျးကွီးက အားရစရာကောငျးလိုကျတာ ဒီလီးကွီးစောကျပတျ ထဲကို ထိုးသှငျးပွီး လိုးတာကို ကမြ အရမျးခံခငျြလာတယျ။ လြှာနဲ့ထိုးပွီးသှငျးမှာထကျ စောကျပတျကိုလီးနဲ့ လိုးရငျးပွီးခငျြလာတယျ။
ဟုတျတယျ လီးနဲ့က ပိုပွီး အရသာကောငျးစမှော .. ကိုစိုးရယျ .. ကမြကို လိုးပါတော့ရှငျ့လီးကွီးကို ကမြစောကျပတျထဲ ထိုးသှငျးပေးစမျးပါ။ လုပျပါကိုစိုးရယျ ကမြကို လိုးပေးစမျးပါရှငျ .. ကမြ အပေါကျထဲကို ရှငျ့အ ခြောငျးကွီး တအားကုနျဆောငျ့လိုးသှငျးလိုကျစမျးပါ။ ကမြ ခံခငျြနပွေီ။ ဘယျလိုမှ မနနေိုငျတော့ဘူး လိုးပါကိုစိုးရယျ လိုးစမျးပါရှငျ .. ကမြက ထုတျဖျေါ တောငျးဆိုလိုကျမိပါတယျ။ အရမျးကို လိုးခငျြနပွေီကိုး ရှကျမနတေော့ပါဘူး ပွီးတော့ စိတျ တူ ကိုယျတူ လိုးကွတာဘဲ။ ဇယြောစိုးကလဲ ကမြလိုဘဲ ထနျနတေပါတယျ။ အ ဖုတျရကျပေးတာကို ခကျြခွငျးရပျပွီး ကမြကိုယျပျေါ တကျခှတယျ။ တကျခှတယျဆိုတာနဲ့ ကမြက သူ့လီးကို ဆှဲယူပွီး နီရဲပွဲလနျနတေဲ့သူ့လီးထိပျဖူးကွီးကို စောကျရညျကွညျတှေ နဲ့ စိုရှဲမို့ဖေါငျးကွနတေဲ့ စောကျဖုတျ အဝမှာ တပေ့ေး လိုကျပါတယျ။ စိတျက အရမျးထနတေဲ့ ဇယြောစိုးဟာ ကမြကတပေ့ေးလိုကျတာနဲ့ ဖိခထြိုးသှငျးလိုကျတာ တဈခကျြတညျး နဲ့ သူ့လီးခြောငျးကွီး တဈခြောငျးလုံး စောကျဖုတျထဲကို တနငျ့ တပိုးဝငျသှားတော့တာပါဘဲ။ သူ့လီးက မသေးပါဘူးရှငျ။
ရှဈလကျမသာသာလောကျ ရှညျပွီး ကပျြလုံးလောကျ ကိုတုတျတာ ..။ တဈခကျြတညျး အဆုံးဖိသှငျးလိုကျတော့ အဖုတျ ထဲမှာ စေးပိုငျတငျးကွပျသှားတာဘဲ။ ဖိနျးရှိနျးပွီး ကွကျသီး ထသှားရအောငျလဲ ကောငျးတယျ။ ကမြပါးစပျက အိုး .. ကြှတျ..ကြှတျ.. ကြှတျ လို့ စုပျသပျညညျးလိုကျမိတယျ။ နာတာကွောငျ့ ညီးတာလား ကောငျးတာကွောငျ့ ညီးတာလား ကမြကိုယျ ကမြတောငျမခှဲခွားတတျတော့ပါ ဘူး နာလဲနာ ကောငျးလဲအရမျးကောငျးနတောကိုး။ လီးအဆုံးဝငျသှားပွီးတာနဲ့ ဇယြောစိုးဟာ ကကြို စပွီးလိုးပါတော့တယျ။ အစပိုငျးမှာတော့ ခပျဖွေးဖွေး တခကျြခွငျး ညောငျ့ လိုးပေးတာ။ သူ့လီးအဖုတျထဲ တိုးဝငျလာတိုငျး ကမြက အိုး ကနဲ ဟငျ ကနဲ ပါးစပျက အသံထှကျမွညျတမျးနမေိတယျ။ လီးထှကျသှားတယျ။ နောကျပွနျဝငျလာတယျ။ ဝငျနတေဲ့လီးကို ထုတျယူတယျ။ နောကျပွနျထိုး သှငျးတယျ။ထှကျလိုကျ ဝငျလိုကျ ဝငျလိုကျ ထှကျလိုကျနဲ့။ သူ့လီးက ရှဈလကျမကြျောကြျော ရှညျတာဆိုတော့ အဆုံးထိုးသှငျးလိုကျတဲ့အခါ သားအိမျကို ဒဈကွီးနဲ့ ထိထိ နတေယျ။
အဲဒီလိုသားအိမျထဲကို စိုကျဝငျ ထိမိတာကလဲ အောငျ့အောငျ့သှားပမေဲ့ အရသာတမြိုးထူးတယျရှငျ။ အလိုး ခံရတိုငျးသားအိမျကို ထိတာမြိုးမှ မဟုတျတာ။ လီးရှညျမှသာ သားအိမျထဲထိ စိုကျဝငျတာ။ ဇယြောစိုးရဲ့လီးကလဲ အလုံးက တျောတျောတုတျ တာမို့ စောကျခေါငျးထဲက အတှငျးသားတှကေိုလဲ သိပျသိပျ သညျးသညျးနဲ့ ပွညျ့ပွညျ့၀၀ ပှတျတိုကျမိတယျ။ ပွီးတော့ သူ့လီးထိုးသှငျး ပွနျထုတျလုပျတာကလဲ လမျးကွောငျးမှနျတယျ။ အဝငျမှာရော အထှကျမှာရော လီး တနျလုံးပတျ အပေိးု့ငျးက ကမြစောကျစကေို့ ကကြနြန ပှတျ တိုကျနတေယျလေ။ ကမြဟာ တကယျ့ကို ရာနှုံးပွညျ့ ပွညျ့ပွညျ့၀၀ အလိုးခံနရေတာပါ။ မစို့မပို့ မဟုတျဘူး ထိထိမိမိ စီးစီးပိုငျပိုငျနဲ့ နငျ့နငျ့ပိုးပိုးကွီးပေါ့။ ဒါကွောငျ့လဲ ကမြဟာ တကိုယျလုံးကို သူ့လကျ ၀ ကှကျပွီးပုံအပျထားလိုကျတာဘဲ။ သူ့စိတျကွိုကျ လုပျခငျြရာ လုပျ လိုးခငျြသလိုလိုးပတေော့။ ကမြစိတျတှေ ပိုထနျလာသလို ကမြတို့ နှဈယောကျ စလုံးရဲ့ လှုပျရှားမှုတှဟာလဲ ပွငျးထနျလာပါတယျ။ သူက ညောငျ့နတောကနေ မွနျမွနျသှကျသှကျနဲ့ အားပွငျးပွငျးဆောငျ့ပွီး လိုးလာပါတယျ။
ကမြကလဲ သူ့ဆောငျ့ခကျြတှနေဲ့ အံကိုကျဖွဈအောငျ အောကျကနေ ကော့ကော့ပေးတယျ။ အရှိနျနဲ့ဝငျလာတဲ့လီးကွီး အဖုတျထဲကို နကျနကျ ရှိုငျး ရှိုငျး အဆုံးဝငျနိုငျအောငျ ပေါငျကိုဖွဲပေးတာမြိုးကိုလဲ အ ခြိနျအဆမိမိလုပျပေးတယျ။ ဇယြောစိုးရဲ့ အသကျပွငျးပွငျး ရှူသံတှေ ကမြရဲ့ ညီးညူမွညျတမျးသံတှဟော ပဲ့တငျထပျလို့နပေါတယျ။ ဒီအသံ တှဘေဲလားဆိုတော့ မဟုတျပါဘူး။ လိုးနကွေတဲ့ အသံဗလံ တှလေဲ ပါတာပေါ့။ သူ့ဆီးစပျနဲ့ ကမြဆီးစပျ ရိုကျမိကွတဲ့ အသံတှကေ တဖတျဖတျ သူ့ဂှေးအုကွီးတှေ ကမြဖငျဆုံကွီးကို ထိရိုကျမိ တဲ့ အသံကလဲ တပွတျပွတျ စောကျရညျကွညျတှေ အတျော ဘဲ စိုရှဲနတေဲ့ ကမြရဲ့ စောကျခေါငျးထဲကို သူ့လီးခြောငျး ကွီးက တရှိနျထိုးဆောငျ့သှငျးလိုကျတဲ့ အသံက တဘှပျဘှပျ။ အဲဒီအသံပေါငျးစုံ ရောနှောပေါငျးစညျးထားတဲ့ ကာမ တေးသံသာက ကမြတို့ရဲ့ ကာမစပျယှကျပှဲကွီးကို ပိုပွီး အသကျဝငျစပေါတယျ။ ဒီအသံတှကွေားနရေတာကလဲ ကမြတို့ နှဈယောကျစလုံးအတှကျ ပိုပွီး စိတျကွှစရာပေါ့။ ပိုပွီးအရသာတှစေ့ရာပေါ့။
ဆောငျ့ .. ဆောငျ့ ကမြကို တ အားဆောငျ့လိုးစမျးပါရှငျ .. ဟငျး . ဟငျး .. ရှငျ့လီးကွီး တဈခြောငျးလုံး လအုပါ မွုပျဝငျသှားအောငျ အားပွငျးပွငျး နဲ့ ဆောငျ့သှငျးလိုကျစမျးပါရှငျ .. ခံလို့ ကောငျးလှနျးလို့ပါ ဘှတျ..ဘှတျ.. အား ဟုတျပီ .. အဲလိုမြိုး .. အဲလိုမြိုး ဆောငျ့ သာဆောငျ့ . .အဖုတျကှဲခငျြကှဲပါစေ .. အမလေး.. ကောငျးလိုကျတာရှငျ .. အား .. ကမြလေ အားပွငျးပွငျးနဲ့ ထိမိတဲ့ သူ့ဆောငျ့ခကျြ တှကေို ရငျသိမျ့တုနျအောငျ ခံရငျး တဈခြီပွီး တခြီ ဆကျ တိုကျကို ပွီးနတောဘဲ။ တခြို့ယောကျြားတှနေဲ့ ဆိုရငျ တခြီကောငျးလောကျသာ ပွီးခဲ့တဲ့ ကမြ အခု ဇယြောစိုးလိုးတာခံရတော့မှ ဆကျ တိုကျပွီးတဲ့အရသာကို တုနျခါမောဟိုကျအောငျ ခံစားနရေ ပါတယျရှငျ။ ကမြလေးခြီမွောကျပွီးသှားတဲ့ အခါမှာ ဇယြောစိုး ဟာလညျး တရှူးရှူးနဲ့ အသကျရှူ အရမျးမွနျလာတယျ။ ဇယြောစိုးရဲ့ ဆောငျ့လိုးခကျြတှကေလဲ ဘာကွမျး သလဲ မမေးနဲ့။ တဘှပျဘှပျနဲ့ စကျသနပျပဈတာထကျ တောငျ မွနျနသေေးတယျ။ သူလဲ အရညျတှထှေကျဖို့ နီးနပွေီဆိုတာ ကမြလဲသိတယျ။ ကမြကို လေးခြီ ဆကျတိုကျပွီးအောငျ လိုးပေးနိုငျ တဲ့သူ့လီးအစှမျးတော့ ကမြ အရမျးခြီးမှမျးမိပါတယျ။
သူ့အတှကျအရသာ ပိုကောငျးအောငျ လုပျပေးခငျြ တဲ့ ဆန်ဒကွောငျ့ ကမြဟာ သူ၏လုံးလုံးကဈြကဈြလေးကို အသာလကျနဲ့ပတျကြျောပွီး သူ့ဂှေးအုတှကေို ညာလကျနဲ့ အ သာလှမျးကိုငျလိုကျတယျ။ ပွီးတော့ အသာဖှဖှလေး ဆုတျ နယျပေးတယျ။ ပှတျပေးတယျ။ ဒါဟာ ယောကျြားတှေ သိပျကွိုကျတဲ့ လုပျဆောငျပွုစုပေးမှုလေးတဈခုပေါ့။ ဇယြောစိုးဟာ ပိုပွီး အရသာတှသှေ့ားတာ သခြော ပါတယျ။ အသကျရှူပိုမွနျလာသလို ဆောငျ့လိုးခကျြတှေ ကလဲ ပိုအားကောငျးပွီး ပိုကွမျးလာတယျ။ နောကျတော့ သူ့လီး ကွီး ငေါကျကနဲ ငေါကျကနဲ လှုပျရှားသှားတာကို ကမြသိရတယျ။ သူ့လရညျတှေ ပနျးထုတျတော့မယျ။ ကိုစိုး .. လရညျထှကျရငျ ကမြစောကျပတျထဲမှာ ဘဲ ပနျးထုတျပေးနျော အဖုတျထဲမှာလရညျတှေ ပွညျ့လြှံ သှားအောငျကို ပနျးထညျ့ပေးပါ နျော .. နျော .. ကမြက ပါးစပျကလဲ ပွော စောကျဖုတျကိုလဲ ညှဈ သူ့လီးကိုလဲ စုပျယူလိုကျတယျ။ အဲဒီအခြိနျမှာဘဲ သူပလီးထဲက သုတျရညျတှေ ပနျးထှကျလာပါလရေော။ ပူပူနှေးနှေး အရညျတှေ စောကျဖုတျထဲ ပွနျ့နှံ့သှားတာကို ကမြခံစားသိရှိလိုကျရပါတယျ။
သူ့သုတျရညျတှကေမြားလိုကျတာ မပွောပါနဲ့တော့ ပနျးထှကျလာ တာ မနဲဘူး စောကျဖုတျထဲ ပွညျ့ရုံမကဘူး အပွငျတောငျ လြှံထှကျတယျ။ အဖုတျထဲ သုတျရညျတှေ အားကောငျးကောငျးနဲ့ ပနျးထညျ့ပေးလိုကျတာမို့ ကမြလဲ ငါးကွိမျမွောကျပွီးသှား ပါတော့တယျ။ အဲဒီငါးကွိမျမွောကျပွီးတာဟာလဲ တကယျ့ကိုထိတယျ။ တကိုယျလုံး ခှပြေော့နုံးလြှသှားစလေောကျအောငျ ကို ဖွဈသှားရတာ။ စောကျရညျတှေ ထှကျတာကလဲ အရမျးဘဲလေ ..။ ဒီနောကျတော့ ဇယြောစိုးလဲ ငွိမျကသြှားတယျ။ လိုးပှဲကွီးက တစခနျးသတျပွီပေါ့။ သုတျလှတျပွီး မကွာခငျမှာဘဲ သူ့လီးက ပြော့ခှေ သှားတယျ။ ဇယြောစိုးဟာ ကမြစောကျဖုတျထဲက သူ့လီးကို ဖွုတျယူပွီး အသာဘေးကို လှိမျ့ဆငျးသှားတယျ။ ပကျလကျ စငျးစငျးကွီးအိပျရငျး အသကျပွငျးပွငျးရှူနတေယျ။ သူက အ၇မျးကိုမောဟိုကျသှားတာပါဘဲ။ သူက ပိုအားစိုကျ လှုပျရှားလိုးဆောငျ့ပေးခဲ့ရတာကိုး ..။ ခဏကွာတော့ ကမြ နညျးနညျး အမောပွသှေား ပါတယျ။ ဒီအခြိနျမှာ ကမြဟာ လှဲအိပျနရောကထပွီး သူ့ခွရေငျးဘကျကိုသှားပါတယျ။ သုတျရညျတှေ စောကျရညျတှေ ပကြေံနတေဲ့ သူ့လီးကို ပါးစပျနဲ့ အသာစုပျပေးတယျ။
သနျ့စငျ သှားအောငျလညျး လြှာလေးနဲ့ အသာယကျပေးလိုကျတယျ။ ဇယြောစိုးဟာ လီးစုပျပေး ယကျပေးနတေဲ့ ကမြကို တခကျြပွုံးပွီးကွညျ့တယျ။ နောကျတော့ မကျြစိကို အသာမှိတျပွီး ဇိမျနဲ့ မှိနျးနတေယျ။ သူ့လီးကို သနျ့သှားအောငျ စုပျပေး ရကျပေးပွီးတော့ ကမြက သူ့ဘေးမှာ အသာပွနျလှဲလြောငျးလိုကျတယျ။ သူ့ရငျ ခှငျထဲမှာ ခေါငျးလေး တငျလို့ပေါ့။ ဇယြောစိုးက ကမြရဲ့ ကိုယျလုံးလေးကို အသာ လကျတဖကျနဲ့ သိုငျးဖကျတယျ။ ကနျြတဲ့လကျတဖကျကတော့ ကမြ ပေါငျကွားက စောကျဖုတျပျေါ အသာအုပျပွီးတငျလိုကျ တယျ။ ပွီးတော့ စောကျဖုတျကို အသာညှဈလိုကျတာ စောကျဖုတျထဲက သုတျရညျနဲ့ စောကျရညျကွညျရောနေ တာတှေ အပွငျကို ယိုစီးကလြာတော့တာပါဘဲ။ ခဏလောကျနားနကွေပွီးတဲ့နောကျ ဇယြောစိုး ဟာ ကမြပါးစပျကို သူ့ပါးစပျနဲ့ တကေ့ပျပွီး စုပျနမျးပွနျတယျ။ ရှာကိုလဲ ကမြပါးစပျထဲထိုးထဲ့ပွီး ကလိတယျ။ ကမြက တုံ့ပွနျနမျးပွီး သူ့လီးကို လကျနဲ့အသာကိုငျ စမျးကွညျ့တော့ ဟော .. သူ့လီးကွီး မတျတောငျနတော ပါဘဲလား။
ကမြဖွငျ့ ယုံတောငျ မယုံခငျြသလိုဘဲ ကမြ တှေ့ ဖူးသမြှယောကျြားတှကေတော့ သုတျလှတျပွီးသှားရငျ လီးလဲ ပြော့ လူလဲ နုံးခှကေသြှားတာပါဘဲ လီးပွနျတောငျလာတဲ့ လူ မတှဖေူ့းသေးဘူး။ ဇယြောစိုးရဲ့လီးကတော့ ခဏအနားယူပွီးတာနဲ့ ပွနျတောငျလာပွီး တောငျတာမှ မတျကိုနတော။ ကမြအဖို့ ကျောပေါကျဘဲပေါ့။ တဈခြီဆကျပွီး လိုးနိုငျတော့မှာကိုး။ ဟောတော့ .. ရှငျ့လီးကွီး ပွနျတောငျလာပါ ရောလား.. ကမြက အံ့သွဝမျးသာစိတျနဲ့ ရရှေတျလိုကျမိတယျ။ ဟုတျတယျ တောငျလာပွီ လီးတောငျတော့ ဆကျ လိုးကွတာပေါ့ မဝငျးမလေဲ အလိုးခံနိုငျသေးတယျ မဟုတျလား.. ခံမယျ .. ဘာလို့ မခံနိုငျရမှာလဲ ရှငျလိုးနိုငျတယျဆိုရငျ ကမြကတော့ အဆငျသငျ့ဘဲ .. ဟုတျပွီ .. ဒါဆိုရငျ လေးဖကျထောကျပွီးကုနျးပေး.. ရတယျ .. ကမြလဲ သူပွောသလို ခကျြခငျြးကုနျးပေးလိုကျပါ တယျ။ စောစောကလိုးထားတာကွောငျ့ ကမြအဖုတျက အရညျ ရှမျးပွီးသားပါ။ ကမြက လေးဘကျထောကျ ကုနျးပေးပွီးတဲ့အခါ ဇယြောစိုးက ကမြဖငျကွီးနောကျမှာ နရောယူလိုကျပါတယျ။ ပွီး တော့ ကမြရဲ့ဖငျသားကွီးနှဈခွမျးကိုဆှဲဖွဲပွီး ဖငျပေါကျပျေါ ကို တံတှေးထှေးလိုကျပါတယျ။
အို.. ဟငျ့ . ကိုစိုး ဘာလုပျအုံးမလို့လဲဟငျ ဖငျပေါကျတဲ့တဲ့ တံတှေးထှေးခတြာခံထားရတာကွောငျ့ ကမြ ခါးလေးတှနျ့သှားပွီး ညုတုတုနဲ့ မေးလိုကျမိ ပါတယျ။ ဘာအတှကျနဲ့ ဖငျပေါကျကို တံတှေးဆှတျတယျ ဆိုတာကိုတော့ ကမြသိပါတယျ။ ဖငျလိုးမလို့ဆိုတာကိုပေါ့။ မဝငျးမေ ဖငျကွီးက ဖွူဖှေးအိပွီး အယျနတော ဆိုတော့ ကနြျော ဖငျလိုးခငျြလာလို့ပါ .. မဝငျးမေ ဖငျခံမယျ မဟုတျလား ရှငျ လိုးခငျြတယျဆိုရငျတော့ ကမြခံပါ့မယျ သိပျ တော့ မကွမျးနဲ့နျော ရှငျ့လီးကွီးက အရမျးကွီးတာဘဲ တအားဆောငျ့ရငျ ကမြဖငျကှဲသှားမှာပေါ့ .. စိတျခပြါ မဝငျးမရေဲ့ နာအောငျ ကြှနျတျော မလုပျ ပါဘူး အရသာတှပွေီ့း ကောငျးကောငျးဘဲ လုပျပေးမှာပါ ပွောပွောဆိုဆို ဇယြောစိုးက ကမြစအိုဝမှာ သူ့လီး ကိုထောကျလိုကျပါတယျ။ ပွီးတော့ ဖိထိုးသှငျးလိုကျတာ လီးက ထဈပွီးအထဲကို တိုးဝငျလာပါတယျ။ အား . ကြှတျ..ကြှတျ.. ဖွေးဖွေးသှငျးရှငျ့ .. နာတယျ .. စအိုဝပွဲအာသှားတာကွောငျ့ ကြိနျးစပျပွီး နာကငျြလှလို့ ကမြညီးလိုကျမိပါတယျ။ ဖငျလိုးတဲ့အခါ လီးစသှငျးသှငျးခငျြး နာတာကတော့ ထုံးစံပါဘဲ ကမြ နားလညျပါတယျ။
ဒါကွောငျ့လဲ ဒူးခေါငျးကို အားပွုပွီး ဖငျဆုံကွီးကို အသာကော့ပငျ့ ပေးထားလိုကျပါ တယျ။ ဖငျလိုးခံဖူးတာကွောငျ့ ကမြဟာ ဖငျပေါကျထဲ လီးအဝငျ အဆငျပွအေောငျ လမျးကွောငျးပှငျ့ ပေးတတျနေ ပါတယျ။ ဇယြောစိုးကလဲ သူ့လီးကွီးကို ဆကျပွီး ဖိထိုးသှငျးလိုကျတယျ။ ကဉျြးကဉျြးကွပျကွပျနဲ့ဘဲ သူ့လီးတဈခြောငျးလုံး ကမြဖငျထဲအဆုံးဝငျသှားပါလရေော။ အဲဒီတော့ ဇယြောစိုးက ကမြရဲ့ ဖငျသားကွီးနှဈ ခွမျးကို လကျနှဈဖကျနဲ့ ခပျတငျးတငျး ဆုတျကိုငျ ဖဈြညှဈပွီး သူ့လီးကွီးကို ကမြဖငျထဲက ဆှဲထုတျလိုကျ ပွနျဖိ ဆောငျ့ သှငျးလိုကျနဲ့ ကမြကို ကောငျးကောငျး ဖငျဆျောနပေါတော့ တယျ။ နာတာကတော့ သိပျကို နာတယျရှငျ့။ ကောငျးတာ ကလဲ အသဲခိုကျမတတျပါဘဲ။ ကမြဟာ တညီးညီး တအားအား အျောဟဈ ညီး တှားရငျး ဇယြောစိုးရဲ့ဖငျလိုးတာကို ခံနပေါတယျ။ သူဟာ ဖငျလိုးတဲ့အခါမှာလဲ လီးကို အဆုံးဖိဆောငျ့ သှငျးတယျရှငျ့။ ဖငျလိုးခံရတာဟာ နာကငျြမှုနဲ့ မူတ ထူးကဲစှာ ကောငျးလှတဲ့ အရသာကို ရောပွနျးထားတဲ့ ကာမအရသာ တဈမြိုးကို ခံစားနရေပါတယျ။ မကွာပါဘူး၊ကမြလဲ ရမကျစိတျတှေ အရမျးဝငျ လာရပါတယျ။
နာတာကို အရေးမစိုကျနိုငျတော့ပါဘူး ဖငျကွီးကို ကော့ပေး၊ ဘယျညာဝှယေ့မျးလုပျပေးပါတယျ။ ဇယြောစိုးကလဲ ကမြနို့အုံကွီးတှကေို လှမျးဆှဲလိုကျ စောကျပတျကိုထိုးနှိုကျ ကလိလိုကျနဲ့ လီးကိုလညျး ကမြ ဖငျ ပေါကျထဲကို အားပွငျးပွငျးနဲ့ ခပျကွမျးကွမျးဘဲ ဆောငျ့လိုး သှငျးနပေါတယျ။ ဖငျလိုးခံရမှုကွောငျ့ ကမြရဲ့ အဖုတျထဲက ယားလာပွီး နှဈခြီဆကျတိုကျပွီးသှားရပါတယျ။ ကမြ ဒုတိယအခြီ အပွီးမှာ ဇယြောစိုးလဲ ကမြဖငျဆုံကွီးနောကျမှာ လှုပျလှုပျ ခါခါနဲ့ ဆနျ့ငငျဆနျ့ငငျဖွဈသှားပွီး ကမြ ဖငျခေါငျးပေါကျထဲကို ပူနှေးပဈြခဲတဲ့ သုတျရညျတှေ ပနျးထညျ့ပေးလိုကျပါတော့ တယျရှငျ မွကျခငျးပျေါတှငျ နှဈယောကျသား ဝမျးလြှား မှောကျရကျသား ဇယြောစိုးနှငျ့ မဝငျးမတေို့သညျ မှိနျး၍ နကွေသညျ။ ဇယြောစိုး၏ လီးကွီးကတော့ သူမ၏ စအိုထဲ မှ မခြှတျသေးဘဲ တနျးလနျးကွီးဖွဈသညျ။ ခဏကွာတော့ ဇယြောစိုးက မဝငျးမေ၏ နားနားသို့ သူ၏ပါးစပျကို ကပျ၍ တိုးတိုးလေးပွောလိုကျသညျ။ မဝငျးမေ ကနြေျာ့တို့ဘေးက ခွုံစပျမှာ ခငျမေ ရောကျနတောကွာပွီ။ စောစောထဲက ကနြျောမွငျတယျ။
ကြ နျောနဲ့လကျတကမျးဘဲ အဲဒါ ဘယျလိုလုပျမလဲ မဝငျးမကေ ခကျြခွငျး အဖွမေပေးသေးခြေ။ သူမကို ပွောလိုကျသော ဇယောစြိုးက ဘာကို ရညျရှယျသညျ ဆိုတာကိုတော့ရိပျမိလိုကျသညျ။ ဒါ့အပွငျ မဝငျးမေ၏ စိတျထဲ တှငျလဲ ညီအမနှဈယောကျအတူတူ အလိုးခံရရငျကောငျး မညျဟုစဉျးစားမိလိုကျသညျ။ ရှငျ သူ့ကို လိုးခငျြလို့လား ပါးခငျြးကပျ၍ တိုးတိုးလေးပွောနကွေခွငျးဖွဈသညျ။ အငျး .. ဒါဆိုရငျ လှမျးဆှဲလိုကျ ကမြကိုလဲ သူနဲ့တူတူ လိုးပေးရအုံးမှာနျော .. အငျးပါ .. ပွောပွီးသညျနှငျ့ ဇယြောစိုးက မဝငျးမေ၏ ကြော ပွငျပျေါတှငျ တပျရကျသားဖွဈနရောမှ ဘေးသို့ ရုတျတရကျ ပကျလကျလှနျခလြိုကျပွီး တဆကျတညျး သူ၏ ကိုယျလုံးကို ဘေးမှခွုံဆီသို့ တပတျလှိမျ့လိုကျကာ ခငျမေ၏ လကျကိုဆောငျ့ ဆှဲလိုကျသညျ။ အမလေး . အငျ့ .. ခငျမဝေငျး ကိုယျလုံးလေးက ဇယြောစိုး၏ ကိုယျပျေါ သို့ မှောကျရကျသားကြ၍လာသညျ။ ဇယြောစိုးက သူမကို ဖကျပွီး တပတျမြှ မဝငျးမဘေေးသို့ လှိမျ့လိုကျရာ ခငျမကေ ဇယြောစိုး၏ အောကျဖကျ မဝငျးမေ၏ ဘေးတှငျ ပကျလကျ လှနျရကျသားဖွဈသှားသညျနှငျ့ သူမကိုလကျဖွငျ့ ဖိ၍ ဇယြော စိုးက ကွုံး၍ထလိုကျလသေညျ။
ဒီအခြိနျမှာပငျ မဝငျးမကေလဲ ကွုံး၍ ထကာ ခငျ မကေို ခြုပျနှောငျပေးလိုကျသညျ။ မလုပျကွပါနဲ့ ဖယျကွပါ သနားပါအုံး အမှနျတော့ လညျဂြာစာအုပျပွနျယူပွီး သူမတို့ နောကျသို့လိုကျလာသော ခငျမသေညျ ဇယြောစိုးနှငျ့ မဝငျး မတေို့ရှိရာသို့ စောစောကထဲက ရောကျနခေဲ့သညျဖွဈသညျ။ လယျဂြာစာအုပျက မဝငျးမေ၏ စိုကျခငျးရှိ အိမျတှငျ သှား၍ ယူရခွငျးဖွဈသဖွငျ့ ခရီးလညျးကြှမျးပွီး မွငျးစီးလဲ ကြှမျးသော ခငျမအေဖို့ သိပျပွီး မကွာလိုကျခြေ။ ခငျမတေဈယောကျ စမျးခြောငျးလေးနား ရောကျ လာပွီး မဝငျးမေ၏ မွငျးကို တှသေ့ညျနှငျ့ အသာဆငျး၍ ကွညျ့ရာ ဇယြောစိုးနှငျ့ မဝငျးမတေို့ နှဈယောကျဖွဈခငျြတိုငျး ဖွဈ၍နသေညျကိုတှမွေ့ငျလိုကျရသညျ။ တခါ အလိုးခံထားခဲ့ဘူးပွီဖွဈသော လီးအရသာကို သိနပွေီဖွဈသော ခငျမသေညျ ဇယြောစိုးနှငျ့ မဝငျးမတေို့ လိုးကွတာကို ကွညျ့ပွီး မခံမရပျနိုငျလောကျအောငျပငျ ကာမ စိတျတှကွှေခဲ့ရသညျဖွဈသညျ။ ဒါကွောငျ့လဲ ခငျမကေ မဝငျးမတေို့နှငျ့ အနီးဆုံး ခွံအကှယျလေးဆီသို့ တိုးကပျသှားပွီး အနီးကပျကာ အသေ အခြာကွညျ့ခဲ့သညျ။
ထို့နောကျ မနနေိုငျလှနျးတော့သဖွငျ့ သူမ၏ စကပျကိုလှနျ ပေါငျနှဈလုံးကို ကားပွီး စောကျခငျေးထဲသို့ လကျညှိုး ထညျ့၍ မဝငျးမေ အားရပါးရအလိုးခံနသေညျကို ကွညျ့ကာ လကျညှိုးကို စောကျခေါငျးထဲသို့ ထုတျခြီ သှငျးခြီ လုပျရုံမြှ မက မှေ၍ပငျပေးခဲ့ပွီး တဈခြီပငျပွီးခဲ့ရသညျ။ သူမ၏ အမကို လိုးနသေော ဇယြောစိုး၏ လီးကွီးကိုလဲ ပွေးဆှဲ၍ သူမ၏ စောကျပတျထဲသို့ ထိုးထဲ့ ခငျြစိတျတှကေ တခြိနျလုံးပွငျးပွ၍နခေဲ့ရသညျ။ အခု တကယျလုပျတော့မညျဆိုတော့လဲ အမဖွဈ သူ၏ရှတှေ့ငျဖွဈနတေော့ ခငျမခေမြာ ထိတျလနျ့၍ နရေသညျ။ အမဖွဈသူက သူမကို ခြုပျပေးထားစဉျမှာပငျ ဇယြောစိုးက ခငျမေ၏ ကိုယျပျေါမှ အဝတျအစားတှေ အား လုံးကို ခြှတျလိုကျပပွေီ။ ဟာ ခငျမေ စောကျပတျကွီးက မို့ပွီး ဖေါငျးကားနတောဘဲနျော လိုးလို့ သိပျကောငျးမှာဘဲ တနှာသံဖွငျ့ မဝငျးမကေ ရီဝစှောပွောသညျ။ ဟာ ကောငျးတာပေါ့ မဝငျးမရော အမ စောကျ ဖုတျက လိုးလို့ကောငျးသလို ညီမ စောကျဖုတျကလဲ လိုးရတာ အရသာသိပျရှိတာဘဲ ဟငျ .. ကိုစိုး လိုးဖူးလို့လား မဝငျးမကေ အံ့သွစှာပွောသညျ။
လိုးဘူးတာပေါ့ .. အို ကနဲ ဖွဈကာ ခငျမေ တဈယောကျ မကျြလုံးနှဈလုံး စုံမှိတျလိုကျသညျ။ ဘယျတုံးက လိုးလိုကျတာလဲ ကိုစိုးရ နခေ့ငျးကဘဲ သိပျအရသာရှိတာဘဲ မဝငျးမရော ညီမလေး စောကျဖုတျကို ကမြရကျပေးမလို့ ကိုစိုးရ .. အေး .. ရကျ ရကျ ပွီးရငျ မဝငျးမကေို လိုးပေးအုံးမယျ .. မ .. မ လုပျပါနဲ့ .. ဟငျ့ .. ဟငျ့ .. ဇယြောစိုးနှငျ့ မဝငျးမတေို့ ရမကျကွဖှယျရာ အပွနျ အလှနျပွောနကွေသညျ့စကားသံမြား အကွားတှငျ ခငျမေ၏ တောငျးပနျသံလေးက ထှကျပျေါ၍ လာသညျ။ တှကွေုံ့ရတော့မညျ့ အဖွဈကို အလှနျ ရှကျကွောကျ နသေျောလဲ မိမိ၏ စိတျမြား ပို၍ ထကွှကာ သောငျးကနျြး ၍ လာရသညျကိုတော့ ခငျမသေညျ သူမကို သူမ သတိ ထားမိသညျ။ ရကျပေးခွငျးမခံရမှီကပငျ စောကျဖုတျသညျ ဖေါငျး၍ တကျလာကာ အရညျကွညျမြားထှကျကြ၍ လာရသညျ။ သညျလို စိတျလှုပျရှား ရမကျဇော ထနျလာရ သညျ့ မိမိ၏ကိုယျကို ခငျမသေညျ လတျတလော မုနျးတီး မိသညျ။ ရမကျဇောမထရလအေောငျလဲ အတငျး ခြိုးနှိမျ ထားရသညျ။ ဒါပမေဲ့ မရနိုငျပါ..။
ဒီအခြိနျမှာဘဲ .. ကဲ .. ညီမလေး .. ဘာမှ ရှကျကွောကျမနနေဲ့ တော့ အားလုံး အကွောငျးသိတှေ ဖွဈနကွေပွီဘဲ .. လာ မမက ညီမလေးရဲ့ စောကျဖုတျကို ရကျပေးမယျနျော .. ပွောပွောဆိုဆို မဝငျးမသေညျ ခငျမကေို သူမ၏ အနားသို့ ဆှဲချေါကာ ပကျလကျလှနျစလြှေကျ ဒူးခေါငျးနှဈလုံးကို ထောငျစလေိုကျရာ ခငျမေ၏ စောကျဖုတျကွီး သညျ ပွဲဟသှားလတေော့ရာ အတှငျး သားနီနီရဲမြားကို မဝငျးမသေညျ မွငျတှလေို့ကျရတော့၏။ ထိုအခါမှ မဝငျးမသေညျ ခငျမေ၏ စောကျပတျကို သူမက လေးဘကျထောကျလြှကျ စတငျရကျပေးလေ တော့သညျ။ ဟငျး .. ဟငျး.. ဟငျး .. မမ .. ဖွေးဖွေး.. အီး .. အား .. အိုး .. ခငျမခေမြာ စောကျဖုတျ အရကျခံရလသေော ကွောငျ့ သူမ၏ပါးစပျမှ တအီးအီး တဟငျးဟငျးဖွငျ့ ညီးညူ နရေရှာလသေညျ။ မဝငျးမကေလညျး အားရပါးရကို ရကျပေး လတေော့ရာ မဝငျးမသေညျ သူမကိုယျကို လေးဘကျ ထောကျကုနျးလြှကျဖွဈနသေညျကို သတိမမူမိပေ။
ထိုအခါမှ ဇယြောစိုးသညျ မဝငျးမကေ သူမ၏ ညီမ စောကျဖုတျကို လေးဘကျကုနျးလြှကျ ရကျပေးနသေဖွငျ့ မဝငျးမေ၏ စောကျဖုတျကွီးသညျ နောကျသို့ ပွူးလြှကျ ထှကျပျေါနသေညျကိုကွညျ့ရငျး စိတျမထိနျးနိုငျတော့ဘဲ မဝငျးမေ၏ နောကျမှ နရေယူကာ သူ၏ လီးထိပျဖူးကွီးဖွငျ့ မဝငျးမေ၏ စောကျဖုတျဝတှငျတကေ့ာ အသာလေးဖိသှငျးလိုကျလတေော့ရာ … ပွှတျ … စှပျ .. ဟူသော မွညျသံဖွငျ့ လီးထိပျ ဖူးကွီးသညျ မဝငျးမေ၏ စောကျခေါငျးထဲသို့ ဝငျသှားလေ တော့သညျ။ အီး .. အား .. ကိုစိုး .. ဖွေးဖွေးနျော .. နောကျပွီး ညီမလေးခငျမကေိုလညျး လိုးပေးရအုနျးမှာ နျော .. တျောကွာ အရမျးပငျပမျးနအေုနျးမယျ .. စိတျခပြါ .. ကနြျော ဖွေးဖွေးနဲ့ မှနျမှနျဘဲ လိုးပေးပါမယျ.. ပွောပွောဆိုဆိုဖွငျ့ ဇယြောစိုးသညျ သူ၏ လီးတနျ ကွီးကို မဝငျးမေ၏ စောကျဖုတျထဲသို့ တဈဆုံးတိုငျ ထိုးသှငျး လိုကျလတေော့သညျ။ ထို့နောကျတှငျတော့ အခကျြ ငါးဆယျလောကျ သှငျးထုတျလုပျပေးလိုကျရာ မကွာမီမှာပငျ ဇယြောစိုး၏ လီးတနျ ကွီးသညျ တငျးမာလာပွီး သုတျရမြေား ပနျးထုတျလိုကျရ လတေော့သညျ……ပွီးပါပွီ။
ဒါ…မ၀င်းမေတို့အိမ်ပါလားခင်ဗျာ ဟုတ်ပါတယ် . ဟုတ်ပါတယ် .. ဘာကိစ္စရှိလို့ ပါလဲ မ၀င်းမေ ကျွန်တော့်ကိုသိပါတယ် .. ခဏလောက် ခေါ်ပေးပါလားဗျာ မ၀င်းမေ ခရီးထွက်နေတယ်ကွဲ့ ကျွန်တော်က ဦးနေစိုးသား ဇေယျာစိုးပါ။ ဒီမှာငွေကြေးစာရင်းလေးတွေရှင်းဖို့ ဖေဖေလွှတ်လိုက်တာပါ ဒီတော့မှ အသက်ငါးဆယ်လောက်ရှိသော ဦးလေးကြီးသည် လှုပ်လှုပ်ရွရွဖြစ်၍ သွားရလေသည်။ အော် .. ဦးနေစိုးရဲ့သားကိုး .. လာလာ အိမ် ထဲဝင် ဦးလေးတို့ကလဲ လူစိမ်းဆိုတော့ ရုတ်တရက် အ၀င် မခံရဲဘူးကွဲ့ .. ဟဲ့ သမီးခင်မေ ဧည့်သည် အတွက် ရေနွေး နဲ့အမဲခြောက်ဖုတ်လုပ်ပါကွဲ့ ရပါတယ် ဦးလေးရာ ကျွန်တော့်အတွက် ဒုက္ခမရှာပါနဲ့ ဒါနဲ့ ဘယ်မှာတည်းလဲကွဲ့ မတည်းရသေးပါဘူး ကျွန်တော်ခုမှရောက်တာ ဟေ့ .. ဒါဆို ဒို့အိမ်မှာဘဲနေ အိမ်ကလဲကျယ် တယ်။ မင်းစိတ်လွတ် ကိုယ်လွတ်နေလို့ရပါတယ်။ တခြား သွားမတည်းရဘူးနော် ဟာ .. မဟုတ်တာ အားနာစရာကြီး ကျွန်တော်အပြင်မှာဘဲ တည်းပါရစေ ဒီမှာ မင်းအဖေနဲ့ ကျုပ်နဲ့က အင်မတန်ရင်းနှီး တာကလား ဒီတော့ မင်းက ကျုပ်စိတ်မကောင်းအောင် တော့မလုပ်ပါနဲ့ကွယ်။
မင်းအဖေရဲ့ ကျေးဇူးတွေကလဲ ဒို့အပေါ်မှာ အများကြီးရှိတယ်။ ကြုံကြိုက်တုံး ပြုစုပါရစေ ကွယ် ကောင်းပါပြီ ခင်ဗျာ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော့်အတွက် တော့ ဘာမှ ထူးထူးထွေထွေတွေ မလုပ်နဲ့နော် အဖိုးကြီးနှင့် ဇေယျာစိုးတို့ စကားပြောနေကြစဉ်မှာပင် အသားလတ်လတ် လူလုံးတောင့်တောင့်အသက် ဆယ့်ခြောက်နှစ်လောက်ရှိသော ကောင်မလေးတစ်ယောက် လင်ဗန်းထဲတွင် လဘက်ရည်ခရားနှင့် စားစရာများ ထည့်ပြီး လက်မှကိုင်ကာ အဖိုးကြီးရှေ့မှ ယို့ယို့လေးဖြတ်၍ လျှောက်လာသည်။ ပြီးတော့ ဇေယျာစိုး၏ ရှေ့တွင် စားစရာများ ချ၍ ပေးလိုက်သည်။ အဖိုးကြီးကတပြုံးပြုံးဖြင့် ကြည့်နေယင်း .. ဒါ မ၀င်းမေရဲ့ညီမ ခင်မေဘဲကွဲ့ မှတ်ထား ဒါ ညီးအကိုလိုသဘောထား တို့ဖေါက်သယ် ဦးနေစိုးရဲ့ သား ဇေယျာစိုးတဲ့ နင့်အမ မလာမချင်း ဒို့အိမ်မှာနေမှာ အစစ ဂရုစိုက်နော် ကလေး ကောင်မလေးက ဇေယျာစိုးကို မရဲတရဲကြည့်ရင်း ခေါင်းငြိမ့်၍ပြသည်။ ပြီးသည်နှင့် ချာကနဲလှည့်ထွက်သွား တော့သည်။ ဇေယျာစိုးက ခင်မေ၏ နောက်ပိုင်းကို အသာခိုး၍ ကြည့်သည်။
လုံးကျစ်နေသော တင်သားလေးတွေက မလှုပ် ချင်လှုပ်ချင်နဲ့ ခါသွားတာတွေ့လိုက်ရသည့်အတွက် ဇေယျာ စိုး၏ စိတ်ထဲ မကြေမချမ်းလေးဖြစ်သွားရသည်။ မ၀င်းမေကတော့ ကြာလိမ့်မယ်ကွဲ့ အနဲဆုံး တပတ်လောက်ကြာမယ် ဘယ်ကိုသွားတာလဲ ဦးလေး .. ဒီလောက်တောင်ကြာရအောင် လိမ္မော်စိုက်ခင်းတွေ လိုက်ကြည့်နေတာကွဲ့ .. ခြံတွေအသစ်တိုးထားတာရှိတယ်လေ။ အဒေါ်နဲ့ သွားဆိုလဲ မရဘူးကွယ်။ ပညာလေးက တတ်တော့ မိဘကိုတောင် မရို သေချင်ဘူး။ အသက်ကလဲ အစိတ်ရှိနေပြီ အိမ်ထောင်ပြု ပါလို့ပြောလို့လဲ မရ။ ကျုပ်က စိတ်မချနိုင်ဖြစ်နေတာ။ ခက်ပါ တယ်ကွယ် ဒီလိုလဲဘယ်ဟုတ်မလဲ ဦးလေးရာ သူလွတ်လွတ် လပ်လပ်နေချင်လို့ဖြစ်မှာပေါ့ အငယ်မ ခင်မေကျတော့လဲ တမျိုးကွဲ့ သူ့အမလို ထက်ထက်မြက်မြက်တော့မရှိဘူး အိမ်ထဲမှာဘဲ ကုတ်နေ တယ်။ ကျောင်းနဲ့ အိမ်နဲ့ဘဲ အခု ကိုးတန်းအောင်ထားပြီလေ ဦးလေး ဒါနဲ့ မ၀င်းမေဆီ ကျွန်တော် လိုက်သွားလို့မရဘူးလား စိုက်ခင်းတွေလဲ ကြည့်ရင်းပေါ့ .. မလွယ်ဘူးကွဲ့ ခရီးက သိပ်ကြမ်းတယ် မြင်းရော စီးတတ်လား။
နဲနဲပါးပါးတော့ စီးတတ်ပါတယ် ဦးလေးရ အေး ဒီခရီးက မြင်းနဲ့သွားရမှာ ဒီကနေ ကားတတန် ခြေကျင်တတန်နဲ့ နောက်ဆုံး မြင်းနဲ့ခရီးဆက်မှ ရောက်မှာ.. ရပါတယ် ဦးလေးရာ မ၀င်းမေလို မိန်းခလေးတောင် သွားနိုင်တာဘဲ နောက်ပြီး ဗဟုသုတလဲရတာပေါ့ ဒီလိုကြီးတော့ ထိုင်စောင့်မနေချင်ဘူး အေး ဒါဆိုလဲ ခင်မေကို လမ်းပြခိုင်းမယ် သတိနဲ့ သွားကြပေါ့ ကျုပ်က ကျန်းမာရေးသိပ်မကောင်းလို့ နို့မို့ယင် လိုက်ပို့ပါတယ် ကွယ် မနက်ဖန် မနက် စထွက်ကြပေါ့ ဟုတ်ကဲ့ ဦးလေး . ခရီးတလျှောက်လုံးချောချောမောမော ရှိခဲ့ရသည်။ သို့ရာတွင် မြင်းငှားသောနေရာရောက်တော့ ပထမဆုံး အ ဆင်မပြေမှုဖြင့် ဆုံဆည်းရသည်။ ငှားမဲ့မြင်းက တကောင် သာရှိသည်။ ဇေယျာစိုးက ခင်မေကို တယောက်တလဲစီးဖို့ ပြောတော့ သူက ခေါင်းငြိမ့်ရှာသည်။ မြင်းငှားသောနေရာမှာပင် ရေမိုးချိုး၍ စားသောက်ပြီး ခရီးထောက်နားလိုက်သည်။ ပြီးတော့မှ ခရီးဆက်၍ထွက်ရန် ပြင်တော့သည်။ ခင်မေက စောစောတုံးကလို ထဘီတိုတိုဖြင့်မဟုတ်တော့ဘဲ စကပ်နီညိုလေးကို ၀တ်၍ထားသည်မှာ အတော်ပင် ကြည့်လို့ကောင်းလှသည်။
မြင်းနဲ့ထွက်လာပြီး တနာရီလောက်လဲ လမ်းလျှောက် လိုက်ရော ဇေယျာစိုးတစ်ယောက် အကျင့်မရှိ၍ အတော်ပင် မော၍လာသည်။ ဒါကိုသိသော ခင်မေက မြင်း ပေါ်မှဆင်းပေးပေမဲ့ သူမကိုလမ်းလျှောက်ခိုင်းပြီး မြင်းပေါ်ကို ဇေယျာစိုးက တက်စီးရန်ကိုတော့ ဇေယျာစိုးက မစီးရက် ဖြစ်နေရသည်။ သူစီး ငါစီးဖြင့် နောက်ဆုံး နှစ်ယောက်စလုံး စီးဖြစ်သွားကြသည်။ ကျွမ်းကျင်သူမို့ ခင်မေက ရှေ့စီးသည်။ ခရီးက တ ဖြေးဖြေးဖြင့် ကြမ်း၍လာသည်။ သစ်ပင်တွေကအုပ်ဆိုင်း၍ နေပြီးလူသွားလူလာလဲမရှိပေ။ လမ်းက အရမ်းလူရှင်းတယ်နော် ဒါဖြတ်လမ်းအကိုရဲ့ လမ်းကြမ်းတယ်။ လူတွေက လမ်းကောင်းဘဲသွားတာများတယ်။ မြင်းကဘာစိတ်ကူးပေါက်သည်မသိ ပုံမှန်ပြေးနေရာမှ ကဆုန်ချ၍ပေးတော့သည်။ အတွေ့အကြုံမရှိသော ဇေယျာစိုးက အထိတ်တ လန့်ဖြင့် ခင်မေ၏ ကိုယ်လုံးလေးကို ဖက်၍ထားသည်။ အတန်ကြာလို့ မြင်းကမောပြီး ရပ်သွားသည့်တိုင်အောင် ဇေယျာစိုးက သူမ၏ ကိုယ်လုံးလေးကို ဖက်ထားဆဲဖြစ်သည်။ ဇေယျာစိုးက သတိမထားမိဘဲ ဆက်လက်၍ ဖက် ထားတာဖြစ်ပြီး။
အဖက်ခံထားရသော ကောင်မလေးကတော့ ဇေယျာစိုး၏ လက်တွေကို အောက်သို့တွန်း၍ ချပေးသည်။ သည်လိုမလုပ်၍လဲမဖြစ်ချေ။ ဇေယျာစိုး၏ လက်တွေက သူမ၏ နို့အုံတွေပေါ်တွင် ဖိ၍ထားသည်။ မြင်းနှင့်ဆက်ပြီး ခရီးနှင်လာသော်လဲ တချက်တချက် ဆောင့်လိုက်တိုင်း ဇေယျာစိုး၏ လက်တွေက သူမ၏ နို့တွေကို သွား၍ သွား၍ ထိမိသည်။ ဇေယျာစိုးသည် သာယာ သလိုဖြစ်မိခြင်းကြောင့်လက်ကို မဖယ်တော့ဘဲ အသာလေး နို့ပေါ်တင်ထားလိုက်သည်။ ကောင်မလေးကလဲ ဖယ်မချ တော့ချေ။ ဇေယျာစိုးက အားတက်လာပြီး အင်းကျီပါးပါးလေးပေါ်က မြင်နေရသော ဘောလီလေးကိုဘဲ အားမလိုအားမရဖြင့် မသိမသာလေး ပွတ်၍ပေးနေသည်။ မသိမသာဆိုပေမဲ့ ကောင်မလေးကတော့ သိပုံရ သည်။ အသံကတော့ တချက်မှ မထွက်။ ထို့ကြောင့်ပင် ဇေယျာစိုးက ရဲရဲတင်းတင်းဖြင့် နို့အုံလေးကို လက်ဝါးနဲ့အုပ် ပြီး ညှပ်ပေးသောအခါ ကောင်မလေးက တခါနှစ်ခါတော့ ဖယ်၍ချသည်။ နောက်တော့ ကိုင်ခွင့်ပြုထားလိုက်သည်။ ဇေယျာစိုးက ခဏကြာ စိတ်တိုင်းကျ ဖျစ်ညှစ်ပေး ပြီးတော့မှ သူမ၏ အင်းကျီအရှေ့ ကျယ်သီးများကို ဖြုတ်၍ ချလိုက်တော့သည်။
အင်းကျီရင်ဘတ်ပွင့်သွားသည့်အတွက် ကောင်မလေး၏ ပုခုံးသားလတ်လတ်လေးများသည် စောလျှင်စွာ ထွက်ပေါ်၍လာသည်။ ဇေယျာစိုးက လက်တဖက်ဖြင့် သူမ၏ခါးကို ဖက် လျှက် ကျန်လက်တဖက်ဖြင့် နောက်ကနေ အင်းကျီကို လှန် ပြီး ဘော်လီအင်းကျီချိတ်ကို ဖြုတ်ပေးလိုက်သည်။ ဒီအခါတွင်တော့ ခင်မေသည် တုန်တုန်ရီရီလေး ဖြင့်ဘော်လီကို ချွတ်ရာမှာ လက်လေးနှစ်ဖက်ကို တဖက်စီ မြှောက် ပေးတာတို့ ချိတ်ဖြုတ်ပေးတာတို့ဖြင့် ကူညီရှာသည်။ ဟင်းလင်းပွင့်သွားသည်နှင့် သူမရင်ဘတ်ကို လက်နဲ့ လျှောက်ပွတ်ရင်း နို့ကို ထိကိုင်မိတာနဲ့ ဂရုတစိုက်ညင်သာစွာ နယ်ပေးလိုက်သည်။ အပျိုစင် အပျိုရိုင်းလေးမို့ ဆိုရမလား။ အခုမှ အပျိုဖေါ်ဝင်စဆိုတော့ တင်းပြီး ရှေ့သို့ချွန်ထွက်ကာ အခွံမနွှာ ရသေးတဲ့ ကွမ်းသီးတစ်လုံးစာလောက်တော့ရှိသည်။ အပျိုကြီးတွေရဲ့ နို့နဲ့မတူဘဲ တကယ့်ကို လတ်ဆတ် သည်။ အရသာပင် ပျော့အိနေတာမျိုးမဟုတ်ဘဲ နို့ကို ဆုတ်ရင်းဖြင့် နောက်ကနေဂုတ်ကို နမ်းစုတ်ပေးပါသည်။ ဇေယျာ စိုးသည် သူမ၏ ဂုတ်တွင်သာမက လက်ပြင်တွေ သွေးချေဥအောင်ပင် နမ်းစုပ်ပေးမိသည်။
ခင်မေကတော့ မြင်းဇက်ကြိုးကို နိုင်အောင် မကိုင်နိုင်တော့ချေ။ ငှက်ဖျားတက်သလို တဆတ်ဆတ်တုန်၍နေ သည်။ ဇေယျာစိုးက သူမ၏ နို့သီးခေါင်းလေးတွေကိုရအောင် ရှာပြီး လက်ညှိုးလက်မကြားတွင် ချေပေး နေမိသည်။ နို့လေးတွေကို မမြင်ရလို့ အားမရပေမဲ့လဲ ဒီ လောက်ရတာကိုပင် ဇေယျာစိုးက ကျေးဇူးတင်နေမိသည်။ ပြီးသည်နှင့် သူမ၏ ၀မ်းဘိုက်သားလေးကို ရှပ်ကိုင်၍ မထိတထိလေး ဖျစ်၍ပေးတော့ရာ ကောင်မလေး တကိုယ်လုံး ကြက်သီးမွှေးညှင်းတွေထ၍လာရသည်။ လက်က တစထက် တစ အောက်ကိုဆင်းသွားရင်း သူမ၏ စကပ်ချိတ်လေးကို ဖြုတ်ကာ စောက်ပတ်လေးဆီသို့ လှမ်းလိုက်သည်။ အမွှေးလေးတွေက ပေါက်ကာစ နုနုတိုတိုလေးတွေဖြစ်သည်။ စကပ်အောက်မှာ ဘာမှ ၀တ်မထားတော့ ဇေယျာစိုးသည် သူမ၏ စောက်ပတ် အကွဲကြောင်းကို လက်ဖြင့် အသာလေးလျှောက်၍ ဆွဲနေသည်။ ပြီးတော့မှ စောက်ဖုတ်လေးကို လက်မလက်ခလယ်တို့ဖြင့် ဟလိုက်ရင်း လက်ညှိုးကို အသာလေး သွင်းပေးလိုက်သည်။ သူမ၏ စောက်ခေါင်းလေးသည် ခြောက်သွေ့၍ ကပ်နေသည်။
ထို့ကြောင့် ဇေယျာစိုးက သူမ၏ စောက်စေ့လေးကို ရှာပြီးကလိပေးတော့မှ အရည်လေးတွေ တစိမ့်စိမ့်ဆင်း လာသည်။ ကောင်မလေးကတော့ ရှက်လို့လားမသိ ခေါင်းငုံ့ရင်း မြင်းကိုသာ ဇွတ်နှင်၍နေသည်။ လက်လဲဝင်လို့ရရော ဇေယျာစိုးက စောက်ခေါင်း ကျဉ်းကျဉ်းလေးထဲသို့ သူ၏ လက်ညှိုးကို သွင်းလိုက်ထုတ် လိုက်ဖြင့်လုပ်၍ပေးနေသည်။ နာရင်လန့်သွားပြီ မကောင်း တာကြောင့် ဖြေးဖြေးလေး မွှေ၍ပေးနေမိသည်။ သူမ၏စောက်စေ့လေးကတော့ စောက်ဖုတ်အပြင်ကိုပင် လက်တဆစ်လောက်စွန်းထွက်၍နေသည်။ ဇေယျာစိုးက လက်နဲ့ကလိပေးတာ ကြာလာတော့ ကောင်မလေးက သိပ်ပြီးအားရဟန်မတူတော့ချေ။ မပီမသ လည်ချောင်းသံလေးတွေ ထွက်လို့လာသည်။ စကားတော့ သိပ်ပြီးပြောရဲပုံမရသေးချေ။ ဇေယျာ စိုးသည် သူမ၏ ဖင်လုံးလုံး ကျစ်ကျစ်လေးကို အောက်ကနေ နှိုက်ပြီး ဆုတ်နယ်ပေးနေမိသည်။ တော်တော်လေးကြာ သွားပြီးမှ .. ညီမ မြင်းကို ခဏရပ်လိုက် သူမက မြင်းကိုရပ်လိုက်လျှင် ဇေယျာစိုးက မြင်း ပေါ်မှ ခုခန်၍ဆင်းလိုက်ပြီး သူမကိုပါ မြင်းပေါ်မှ ပွေ့၍ ချ လိုက်ရာ။
အားလွန်ပြီး မြေပြင်ပေါ်သို့ နှစ်ယောက်သား ဖင် ထိုင်ရက်ကျသွားကြလေသည်။ မြေပြင်ပေါ်သို့ရောက်သည်နှင့် ဇေယျာစိုးက ချက် ခြင်းပင် သူမကို မျက်နှာချင်းဆိုင် ဆွဲ၍လှဲ့လိုက်သည်။ ကောင်မလေးက သူ့ကိုမကြည့်ရဲဘဲ မျက်နှာလေးကို ငုံ့၍ ထားသဖြင့် ဇေယျာစိုးသည် သူမ၏ မျက်နှာလေးကို ဆွဲ၍ မော့လိုက်ကာ သူမ၏ နှုတ်ခမ်းဖူးဖူးလေးကို ယုယုယယ လေး စုပ်ပေးလိုက်သည်။ သူမ၏ နှုတ်ခမ်းလေးများသည် လေတိုးခံရသောနှင်းဆီပွင့်ချပ်များနှယ် တဆတ်ဆတ်တုန်၍နေသည်။ သူမကို အနမ်းဖြင့် ညှို့ယူနေတုံးမှာပင် ဇေယျာစိုး၏ လက်တဖက်က ဘောင်းဘီဇစ်ကိုဖြုတ်ပြီး အပြင်မထွက်ရသဖြင့် ဒေါသတကြီးပါးပျဉ်းထောင်နေသော လီးကြီးကို ဂုတ်ကနေကိုင်ပြီး ဆွဲထုတ်လိုက်သည်။လီးကြီးသည် ချစ်ချစ် တောက်ပူနွေးနေပြီး တဆတ်ဆတ်တုန်၍နေသည်။ မြေကြီးပေါ်တွင် မျက်နှာချင်းဆိုင် ထိုင်နေလျှက် မှ ဇေယျာစိုးက သူ၏ ခြေထောက်နှစ်ဖက်ကို ကောင်မလေး အား ခွ၍ ကားကာ ဆန့်တန်းလိုက်သည်။ ပြီးတော့ ကောင် မလေး၏ ပေါင်နှစ်လုံးကိုလည်း သူ၏ပေါင်ရင်းတွင် တဖက် တချက်ဆန့်တန်း၍တင်ကာ သူ၏ခါးကို ခွစေလိုက်သည်။
ထို့နောက် ကောင်မလေးကို ခါးမှဆွဲယူကာ သူမ၏ စောက်ပတ်ဝကျဉ်းကျဉ်းလေးထဲသို့ လီးထိပ်ဖူးကို အသာ လေး ထိုးထဲ့လိုက်သည်။ ကောင်မလေး၏ မျက်နှာတစ်ချက်မဲ့၍ သွားသည်။ သိပ်တော့ မလွယ်လှချေ။ ညိမ ..အကို့ကိုဖက် .. မရှက်ပါနဲ့ကွယ် သူမကဇေယျာစိုး၏ ပုခုံးပေါ်မေးတင်ရင်း ရွရွလေး ဖက်ထားလိုက်သည်။ ဇေယျာစိုးက ကောင်မလေး၏ တင်သားနှစ်လုံးကို စုံကိုင်ကာ မလိုက်ပြီး သူ၏ ကာထာသော ခြေနှစ်ဖက်ကို စုလိုက်ကာ ကောင်မလေး၏ တင်သားများကို သူ၏ ပေါင်ပေါ်တွင်တင်ပေးလိုက်သည်။ ထိုအခါတွင်တော့ ခြေဆင်း၍ ထိုင်နေတော့ ဇေယျာ စိုး၏ပေါင်ရင်းတွင် ခင်မေက ဇေယျာစိုး၏ ကိုယ်ကို ခြေနှစ် ဖက်ဖြင့် ခွ၍ထိုင်ထားသော အနေအထားသို့ ရောက်သွား သည်။ သူမ၏ စကပ်လေးကို လှန်၍ စောက်ဖုတ်ကိုလက်ဖြင့် နှိုက်ကြည့်လိုက်တော့ ရွှဲ၍နေသည်။ လီးကို စောက် ပတ်ဝတွင်တေ့၍ သူမ၏ ခါးကို ဖိချလိုက်သည်။ ဗြစ် .. ဗြစ်. ဗြစ်.. ဖေါက် .. ဒုတ် .. အ .. အ .. အား .. စောက်ခေါင်းထဲသို့ လီးကမဆန့်မပြဲ ၀င်သွားပြီး အပျိုမှေးကို ဖေါက်သံနဲ့သားအိမ်ကို ထိသံတို့သည် အစဉ်အတိုင်းထွက်ပေါ်၍လာသည်။
ခင်မေက ပထမ အ .. အ .. နဲ့ ကြိတ်မှိတ်ပြီးခံနေပေမဲ့ အပျိုမြှေးပေါက်ပြီး သားအိမ်ကိုလဲ ထိရော ငယ်သံ ပါအောင်အော်လိုက်တော့သည်။ သူမသည်ဇေယျာစိုးကို အတင်းပင် တွန်းသည်။ မရပါ။ ဇေယျာစိုးက သူမ၏ ခါးလေးကို အသေဖက်၍ ထားသည်။ ဇေယျာစိုးက သူ၏ခါးကို ယူကာ သူမ၏ ခါးလေး ကို ဆွဲရင်း ညင်သာစွာဖြင့်သူ၏ လီးကြီးများကို အသွင်း အထုတ်လုပ်ကာ လိုးပေးသည်။ တချက်တချက် ခပ်နာနာ လေးဆောင့်လိုက်သေးသည်။စွပ်.. ဒုတ်.. အား .. အား .. ဒုတ် .. အ . အာ့ .. ဇေယျာစိုးက ကြမ်းတခါ ချော့တလှည့် တလှည့် ဖြင့် ဆက်တိုက်လိုးပေးလိုက်တော့ သူမ၏ စောက်ခေါင်းက ကျဉ်းလွန်းသဖြင့် လီးကိုလက်နဲ့ညှစ်ပြီး ဆုတ်ထားသလို ဖြစ်တာကြောင့် ဆယ်မိနစ်အကြာလောက်မှာပင် လီးကြီး သည် တဇတ်ဇတ်တုန်လာပြီး ခင်မေ၏ စောက်ခေါင်းထဲသို့ သုတ်ရည်များကို ပန်း၍ထည့်လိုက်လေတော့သည်။ နှစ် ယောက်စလုံး၏ ပေါင်ခြံများတွင်တော့ သွေးတွေက ချင်း ချင်းနီရဲနေသည်။ ကောင်မလေးခမျာမှာတော့ ငယ်သေး သည့်အတွက် ပြီးလို့ပြီးမှန်းမသိ။ နုံးခွေသွားတာကိုဘဲ သိလိုက် သည်။
အရည်တွေ ပန်းထွက်ကုန်တာကိုလဲ သူမကိုယ်သူမ မသိချေ။ အောက်ဆုံးတော့ မျက်ရည်လည်ရွဲဖြင့် ဇေယျာစိုး ကို အတင်းကြုံး၍ဖက်ပြီး နမ်းပါတော့လေသည်။ ဒီနေရာမှနောက်ထပ် နာရီဝက်လောက် နားပြီးတော့မှ ဆက်၍ ခရီးနှင်ခဲ့လေသည်။ ဇေယျာစိုးနှင့် ခင်မေတို့သည် ဆက်၍ခရီးနှင်လာ ကြရင်း စမ်းချောင်းလေးတခုကိုတွေ့၍ နှစ်ယောက်သား ဆင်းပြီးကိုယ်လက်သုတ်သင်ကြသည်။ တယောက်နှင့်တယောက် စကားတော့ မပြောဖြစ်ချေ။ ခင်မေက ရှက်နေပုံရသည်။ ဇေယျာစိုးသည်လဲ အတွေ့ အကြုံသစ်ကြောင့် နုံးချိ၍နေသည်။ အေးမြသော ရေတွင် ထိနှစ်၍ချိုးလိုက်ကြတော့ နှစ်ယောက်စလုံးလန်း၍ သွားသည်။ ပြီးမှ နှစ်ယောက်သား ခရီးဆက်ခဲ့ကြသည်။ ညနေ လဲအတော်စောင်းသွားပြီဖြစ်သည်။ ဤကဲ့သို့ တဖြေးဖြေးခရီးထွက်ခွာ၍ လာရာ ခဏမျှ ကြာတော့ သူတို့၏ ရှေ့နားမှ မြင်းခွာသံကြားရသည်။ မှောင် စပျိုးနေပြီဆိုတော့ ဘာမှသဲသဲကွဲကွဲ မမြင်ရချေ။ ၀ါးတရိုက် လောက် ကွာတော့မှ ခင်မေက ဇေယျာစိုးဖက်သို့ လှမ်းရင်း ပြောလိုက်သည်။
မမလာနေပြီ .. ရှင်တော့ ကံကောင်းတာဘဲ ဟယ် ညီမလေး .. ဘယ်ကိုသွားမလို့လဲ .. မ၀င်းမေက ဇေယျာစိုးဖက်သို့ မျက်လုံးကစားရင်းမေးလိုက်သည်။ မမဆီလာတာပေါ့ ဟောဒီက ကိုဇေယျာစိုးက မမ နဲ့တွေ့ချင်တယ်ဆိုလို့ သူက ဦးနေစိုးရဲ့သားပေါ့။ မမ မှတ်မိရဲ့လား ငယ်ငယ်တုံးကတော့ တွေ့ဖူးတယ်လို့ အဖေက ပြောတယ် အော် ကိုဇေယျာစိုးလား ငယ်ရုပ်တော့ နဲနဲ ကျန် သေးတာဘဲ ဒါပေမဲ့ မပြောရင် မှတ်မိမယ်မထင်ဘူး တွေ့ရတာ ၀မ်းသာပါတယ်ဗျာ .. ကျွန်တော်လဲ မ၀င်းမေကို အိမ်က ထိုင်ပြီး စောင့်မနေချင်တာနဲ့ စိုက်ခင်း လဲကြည့်ရအောင်ဆိုပြီး လိုက်လာတာပါ စိုက်ခင်းကတော့ အားလုံးအိုကေပါဘဲ .. မအိုကေတာက အလုပ်သမားတွေဘဲ။ လခတိုးတောင်းနေကြ တယ် .. အင်းလေ .. ကြည့်လုပ်ကြတာပေါ့ .. ဒါနဲ့ မ၀င်းမေ ဘယ်သွားမလို့လဲ အိမ်ပြန်မလို့လေ .. ဘာမှ လုပ်စရာမရှိတော့ ဘူးရှင့် .. ဒါဆိုလဲ ကျွန်တော်တို့ပါ ပြန်လိုက်ခဲ့မယ်။ အဓိက ကတော့ မ၀င်းမေနဲ့ တွေ့ဖို့ပါဘဲ။ နောက်ကြုံတော့မှဘဲ စိုက်ခင်းတွေကြည့်တော့မယ်။ အခုမိုးချုပ်နေတော့ ခရီးဆက် လို့ဖြစ်ပါ့မလား။
ကျမတို့ကတော့ သွားနေကျဘဲ ဒါဆိုလဲ သွားကြတာပေါ့ .. ညီမလေး မမ စကားပြောရင်းနဲ့ လယ်ဂျာစာအုပ် တွေ မေ့ကျန်ခဲ့တာ သတိရတယ်။ သွားယူလိုက်ပါကွယ် နော် မမတို့ ခရီးဆက်နှင့်မယ် အလုပ်တွေအများကြီးရှိသေးတယ် မဟုတ်လား .. ဟင် .. မမကလဲ အဝေးကြီးသွားရမှာ မသွားချင်ပါဘူး .. သွားပါကွယ် ငါ့ညီမက လိမ္မာပါတယ်မမ မုန့်ဖိုးပေးမယ် ဟုတ်လား .. နော် .. ညီမ .. ချာတိတ်မသည် ဇေယျာစိုးကို စူးကနဲ တစ်ချက် ကြည့်ရင်း မြင်းကို ချာကနဲ လှဲ့ကာ မသွားချင်သွားချင်ဖြင့် ထွက်ခွာသွားပါတော့လေသည်။ ဒီညမ တစ်ယောက်ရှိလို့သာ ကျမသက်သာတာ နို့မို့ယင်တော့ သေမှာဘဲ အလုပ်တွေက များတော့ တယောက်ထဲ မနိုင်ဘူးရှင့် .. ခင်ဗျားတို့က မိသားစု သိုက်သိုက်ဝန်းဝန်းရှိတော့ ပျော်စရာဗျာ ကျွန်တော်အားကျတယ်ကျနော်ကတော့ တဦး တည်းသောသားမို့ အထီးကျန်သလိုပါဘဲဗျာ ကဲ..ခရီးဆက်ကြစို့ ဇေယျာစိုးနှင့် မ၀င်းမေတို့သည် စကားတပြောပြော ဖြင့် ခရီးဆက်ခဲ့ကြရာ စောစောကဇေယျာစိုးနှင့် ခင်မေတို့ ခရီးတစ်ထောက်နားသော စမ်းချောင်းလေးနားသို့ ရောက် ခဲ့လေသည်။
ဒီမှာ ခဏနားရအောင် ကိုဇေယျာစိုး .. ကျမမြင်းလဲမောနေပြီ ကောင်းတာပေါ့ဗျာ .. ကျွန်တော်လဲ မြင်းစီးရာပင်ပန်းနေပြီ ဇေယျာစိုးသည် မြင်းပေါ်မှ ဆင်း၍ မျက်ခင်းပေါ်အသာလဲလျှောင်းလိုက်သည်။ လကထိန်ထိန်သာနေသည်။ နေ့ခင်းနေ့လည် အ တိုင်းပင် လင်းထိန်၍နေသည်။ စမ်းချောင်းလေးကလဲ တ သွင်သွင်စီးဆင်း၍နေသည်။ စမ်းချောင်းလေး၏ တဖက်တချက် ၀ဲယာတစ်လျှောက်မှာလဲ နှစ်ချို့သစ်ပင်ကြီးတွေက စမ်း ချောင်းလေး ကမ်းနဖူးနှင့် ပျမ်းမျှ ဆယ်ပေ ဆယ့်ငါးပေ၊ ပေနှစ်ဆယ်လောက်တို့တွင် အုံ့ဆိုင်းစွာဖြင့် ပေါက်၍နေသည်။ လေကလဲ တဖြူးဖြူးတိုက်နေတော့ ဒီနေရာလေးသည် အတော်ပင် သာယာလှပေသည်။ ဇေယျာစိုးတစ်ယောက် ပတ်ဝန်းကျင်၏ သာယာမှုကိုခံစားနေစဉ်မှာပင် သူ၏ခေါင်းတဲ့တဲ့တွင် မ၀င်းမေက မတ်တပ်ရပ်၍လာသည်။ ဇေယျာစိုးက အောက်ကနေ ပင့်ကြည့် လိုက်တော့ သူမက ထိုးထိုးထောင်ထောင်ဖြင့် ဖြစ်နေသည်။ သူမ၏ရွှေရင်အစုံသည်လည်း အောက်ခံပါဟန်မတူကြောင်း သတိထားမိလိုက်သည်။ သူမ၏ ပေါင်တံကြီးတွေကလဲ တုတ် တုတ်ခိုင်ခိုင်ဖြင့် ဖြစ်ကာ။
စောစောက မြင်းကုန်းနှီးမှာ ချိတ် ထားသော အထုတ်တထုတ်ကို သူမ၏ လက်တဖက်ဖြင့် ဆွဲ ထားသည်ကိုတွေ့လိုက်ရသည်။ ကိုဇေယျာစိုး ဘိုက်မဆာဘူးလား ကျမတော့ ဆာရင်စားဖို့ ခေါပုတ်တွေယူလာတယ်။ စားဖူးတယ်မဟုတ်လား ရော့သကြားနဲ့ တို့စား စားမိယင်စွဲသွားတာချည်းဘဲ ကောင်းတယ် မဟုတ်လား မ၀င်းမေသည် ပြောပြောဆိုဆို ခေါပုတ်ထုတ်ကို ဘေးသို့ချလိုက်ပြီး သူမသည် မြက်ခင်းပေါ်လှဲ၍ ချလိုက်သည်။ နှစ်ဦးသား စကားမပြောမိကြတော့ချေ။ ဒါပေမဲ့ ခဏနေတော့ ပလုတ်ပလောင်း စားနေတာကို ရပ်လိုက်ပြီး .. ကိုဇေယျာစိုး ရှင်နော် တချိန်ကျရင် ဒီတောအုပ် ထဲမှာ ကျမနဲ့ နှစ်ယောက်ထဲနေခဲ့ပြီး ဘာမှ အကျိုးအမြတ် မရှိဘဲ အချိန်ကုန်ပြီး ပြန်သွားရတာလို့ တွေးပြီး နောင်တရနေချင်သလား အို ဘယ်ရချင်ပါ့မလဲဗျာ .. ဇေယျာစိုးက ပြောလိုက်ရင်း ငေါက်ကနဲထထိုင် ကာ သူမကို စိုက်၍ကြည့်မိသည်။ မ၀င်းမေက တစ်ချက်ပြုံးလိုက်ရင်း .. ရှင် စိတ်ဝင်စားရင် အ၀တ်အစားတွေ ချွတ်လိုက် ပါ။ ကျမလဲချွတ်လိုက်မယ်။ တစ်ခုတော့ရှိတယ် ရှင်ကျမကို အထင်တော့မသေးလိုက်နဲ့။
ကျမက ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းသမား နောက်ပြီး ခေတ်ပညာတတ်တစ်ယောက်။ ကျမက ယောက်ျားတွေကြားမှာ ယောက်ျားတွေနဲ့ ယှဉ်ပြီးလုပ်နေရတာ။ ရှင့်ကို မြင်မြင်ချင်းဘဲ ကျမစိတ်ထဲမှာ ဆန္ဒတွေ တားဆီးလို့ မရတော့ဘူး။ ဒါကြောင့် ညီမလေးကို ပထုတ် လိုက်တာ ရှင်သဘောမတူလဲကျမကတော့ အတင်းကြံမလို့ဘဲ အခုတော့ အဆင်ပြေသွားတာပေါ့ မ၀င်းမေသည် စကားလဲပြော အင်းကျီကို ကျယ်သီး တွေဖြုတ်ပြီး ချွတ်ချလိုက်သည်။ သူမ၏ ညီမလို မဟုတ်ဘဲ အသားရေက နီစပ်စပ်ဖြင့်ဖြစ်သည်။ မို့မို့တင်းတင်းဖြင့် နို့နှစ်လုံးဟာလဲ လရဲ့အလင်းရောင်ကြောင့် တောက်ပ၀င်းပြောင်၍နေသည်။ နို့သီးခေါင်း တွေက လက်သန်းတဆစ်လောက်ရှိပြီး အောက်ကို ငိုက်၍ နေသည်။ နို့သီးခေါင်းလေးတွေက ညိုရောင်သန်းနေသည်။ ပိတုန်းနှစ်ကောင် ကြာငုံပေါ်နားနေသလိုပင်ဖြစ်သည်။ ဇေယျာစိုးက တုန်တုန်ယင်ယင်နဲ့ သူ၏ ကိုယ်ပေါ် မှ အင်းကျီတွေ ချွတ်ချလိုက်တော့ ကြွက်သားအဖုအထစ် များဖြင့် ဇေယျာစိုး၏ ကိုယ်လုံးကြီးကို အာသာငမ်းငမ်းဖြင့် သေချာစိုက်ကြည့်နေယင်း သူမ၏ ဘောင်းဘီချိတ်ကို ဖြုတ် ကာ ဇစ်ကိုဆွဲ၍ချလိုက်သည်။
ဟ သွားသော ဘောင်းဘီဇစ်ကြားမှ သန်မာသောစောက်မွှေးမဲမဲများသည်အခွေလိုက် ထွက်ပေါ်၍လာသည်။ မ၀င်းမေကတော့ ခပ်စောစောပင် ဘောင်းဘီကို ဆွဲ၍ ချွတ်ချ လိုက်သည်။ အတွင်းခံဝတ်မထားသောကြောင့် ဘောင်းဘီ ကျွတ်ထွက်သွားလျှင်ပင် သူမ၏ တကိုယ်လုံးသည် ၀တ်လစ်စလစ်ဖြစ်၍သွားရလေသည်။ ကြီးမားတောင့်တင်းပြီး ဖြောင့်စင်းလှသော သူမ၏ ပေါင်တံကြီးများက လရောင်အောက်တွင် ပုဇွန်ဆီရောင် ထ၍နေသည်။ သူမချွတ်ပြီးသွားသည်နှင့် ဇေယျာစိုးဆီသို့ လှလှပပလှမ်း၍လာပြီး ဘောင်းဘီကို ၀ိုင်း၍ချွတ်ပေးသည်။ ဇေယျာစိုးက သူမ၏ နို့သီးတွကို လှမ်းပြီး ဆုတ်ကိုင်လိုက်သည်။ ပျော့အိနွေးထွေးလှသော အထိအတွေ့ကြောင့် ဇေယျာစိုး၏ တကိုယ်လုံး တရှိန်းရှိန်းနဲ့ ရမက်ခိုးတွေ တက်လာတော့သည်။ ဇေယျာစိုးနှင့် မ၀င်းမေတို့သည် မတ်တပ်ရပ်လျှက်မှ တယောက်ကိုတစ်ယောက်ဖက်ကာ မျက်ခင်းပေါ်သို့ ထိုင်ချ လိုက်ကြသည်။ ဇေယျာစိုး၏ နှုတ်ခမ်းတွေက မ၀င်းမေ၏ နှုတ်ခမ်းများကိုမော့၍ စုပ်နမ်းလိုက်ချိန်မှာတော့ ချက်ခြင်း ပင် မ၀င်းမေက တုံ့ပြန်ကာ ဇေယျာစိုး၏ နှုတ်ခမ်းများကိုပြန်လှန်၍ စုပ်နမ်းပေးလေသည်။
ရမက်ဇောတွေတက်နေသော ကျမတို့နှစ်ယောက် မြက်ခင်းပေါ်ကို အကျနပင် ယှဉ်တွဲ၍ လှဲချလိုက်မိပါတယ်။ ကျမတို့နှစ်ယောက်ဟာ ရင်ချင်းအပ်ရက် ဆီးစပ်ချင်းထိရက် ပေါင်ချင်းထိရက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဇေယျာစိုးဟာ ကျမရဲ့ ကော့ထောင်နေတဲ့ နို့သီး ခေါင်းလေးကို ပါးစပ်နဲ့ ငုံပြီး စို့ပေးတယ်။ တော်တော်သန် တဲ့ လူဘဲရှင်။ အိုး .. ဟင့် ..အင့် .. ကိုစိုး .. ကိုစိုး .. အို ကိုစိုး ..ရယ် စို့စမ်းပါ .. ကျမနို့သီးကို ကောင်း ကောင်းစို့ပေးစမ်းပါ။ ဟင်းဟင်း ကောင်းတယ် .. ကောင်း တယ် .. နို့စို့ပေးတာ သိပ်ခံလို့ ကောင်းတာဘဲ .. ဟင့်.. ဟင့် .. ဟင့် .. သူကနို့စို့ပေးရုံတင်မဟုတ်ဘဲ နို့သီးတ၀ိုက်ကိုလဲလျှာနဲ့ ၀ိုက်ဝိုက်ပြီး ရက်ပေးလိုက်သေးတယ်။ အဲဒီလိုရက်လိုက်တဲ့အခါများ ကျမဟာ မျက်ချင်းပေါ်ကနေ ကော့ပျံကြွတက်သွားရတာဘဲ စိတ်တွေကလဲ အရမ်းကို ထကြွလို့ရွလာရပါတယ်။ နို့သီးနှစ်ခုကို တလှည့်စီစို့ပေး ရက်ပေးပြီးတဲ့ နောက် ဇေယျာစိုးရဲ့ ပါးစပ်ဟာ အောက်ဖက်ကို တစတစ ရွေ့ လျှားလာပါတယ်။ ကျမရဲ့ ဗိုက်သားပျော့ပျော့ အိအိ ချပ် ချပ်လေးတစ်လျှောက်အသာရက်ပေး စုပ်ပေးရင်း ရွေ့လျှား လာလိုက်တာ။
ကျမရဲ့ ဘိုက်သားပြင်လေးပေါ်မှာ သူရက် ပေးထားလို့ တံတွေးလေးတွေနဲ့ ပြောင်လက်လို့နေပါတယ်။ တဖြေးဖြေးအောက်ဖက်ကို ရွေ့ဆင်းလာတဲ့ ဇေယျာ စိုးရဲ့ပါးစပ်ဟာ ကျမရဲ့ချက်ပေါ်ကနေ ဆီးခုန်ဖက်ကို ရွေ့ ဆင်းသွားပြီး တဖြေးဖြေး သူ့ပါးစပ်ဟာ ကျမရဲ့ စောက်ဖုတ် နဲ့ နီးသထက်နီးစပ်လာရပါပြီရှင်။ ကျမဟာ အလိုးခံရတာကို သဘောကျသလို စောက်ပတ်ရက်ပေးတာကိုလဲ အရမ်းကြိုက်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အား .. ဟင်းဟင်း .. ကိုစိုးရာ ဟုတ်ပြီ .. ဟုတ်ပြီ .. ဟင်းဟင်း .. ကျမစိတ်တွေ အ၇မ်းထလာ ပြီ နော် .. အို အို. ရက် .. ရက်ပါတော့ .. ကျမ စောက် ဖုတ်ကို ထိုးထဲ့ပြီး ရက်လိုက်စမ်းပါ ဆီးစပ်တစ်လျှောက် တဖြေးဖြေး ရွေ့ဆင်းလာနေတာကို မစောင့်နိုင်တော့ဘဲ ကျမက အငမ်းမရ ထုတ်ဖေါ် ပြောလိုက်ပါတော့တယ်။ အဲဒီလိုပြောလိုက်တဲ့အခိုက်မှာဘဲ ကျမရဲ့ စောက် ပတ်ထဲက အရည်ကြည်တွေက အတော်ကြီးကို စိမ့်ထွက် လာပါတယ်ရှင်။ ဘယ်လောက်များသလဲဆိုရင် အရည်တချို့ ဟာ အပြင်လျှံထွက်ပြီး ဖင်ခေါင်းတစ်လျှောက် စီးကျသွားတဲ့ အထိပါဘဲရှင်။
ဟော .. သူ့ပါးစပ်က ကျမစောက်ပတ်နားကို ရောက်လာပြီး ရက်တော့ရက်မပေးသေးပါဘူး .. ကျမဟာ သူ့ပါးစပ်နဲ့ ကျမစောက်ပတ် ထိမိ အောင် ဖင်ကြီးကို ကော့ကော့ပေးမိတယ်။ အလိုးခံရတဲ့ အခါ လုပ် ပေးသလိုမျိုးပေါ့ ။ ကျမရဲ့စောက်ဖုတ်ဟာ ဖေါင်းပြီး စောက်စေ့လေး လဲမာကြောထောင်ကြွလို့တက်နေပါပြီ။ အရမ်း အရမ်း ခံချင် နေတာ။ အစုပ်ခံချင်နေတာ။ ဟုတ်တယ် မနေနိုင်တော့ဘူး။ ရက်ပေးပါ ကိုစိုးရယ် ကျမစောက်ဖုတ်ကို ကောင်းကောင်းရက်ပေးစမ်းပါရှင်။ ကျမ မနေနိုင်လွန်းလို့ပါကျမက ထပ်ပြီး လော်ဆော်တိုက်တွန်းလိုက်မိ ပြန် ပါတယ်။ ဇေယျာစိုးကတော့ တကယ်ပါဘဲရှင်။ မရက်ခင် အဖုတ်ကို အရင်ဖြဲကြည့်နေတော့တယ်။ အဖုတ်နှုတ်ခမ်းကို လက်ချောင်းတွေနဲ့ ကျကျနနကိုင်ပြီး အသေအချာကို ဖြဲ ကြည့်နေတယ်။ ကျမစောက်ဖုတ်ဟာ နီရဲပြဲအာပြီးနေမှာပါ ဘဲ ..။ ကိုယ့်ပေါင်ကြားကိုယ် ငုံ့မကြည့်နိုင်တာကြောင့် အဖုတ်ရဲ့အနေအထား ဘယ်လိုလဲဆိုတာကိုတော့ ကျမ အသေအချာ မသိဘူးပေါ့ရှင်။ စိတ်ကူးနဲ့ဘဲ မှန်းဆကြည့်ရတာပါ။ အဲသလိုဖြဲကြည့်ပြီးမှ သူ့ပါးစပ်ကို စောက်ပတ်ပေါ် ကျကျနနအုပ်ပြီး မရွံမရှာစုပ်နမ်းတယ်။
အောင်မလေး ..လေး .. ကိုစိုးရဲ့ ကျမလေ တကိုယ်လုံးကို တုန်သွားရပြီး ငယ်သံပါ အောင်အော်ပစ်လိုက်မိပါတယ်။ ကောင်းလိုက်တာလဲ မပြောပါနဲ့တော့ ဘယ်နဲ့ စောက်ဖုတ်ကို ပါးစပ်နဲ့တေ့ကပ်ပြီး နှုတ်ခမ်းချင်းစုပ်သလိုမျိုး စုပ်ပေးတာကို သူ့ရှာကလည်း အဖုတ်ထဲကို ထိုးထဲ့ပြီး လှည့် ပတ်ကလိပေးသည်။ ရက်ပေးသည်။ ကျမ အသက်ရှူပြင်းတွေ ပြင်းလာတယ်။ ကျမရဲ့ ၀မ်းပျဉ်းသားပျော့ပျော့အိအိလေးဟာ ပိန်လိုက် ဖေါင်းလိုက် ကိုဖြစ်လို့ ပေါင်ကြီးနှစ်ချောင်းလဲ ကားလိုက် စုလိုက်နဲ့ဖြစ် နေရတယ်။ သူက ကျမစောက်ပတ်မှာ စိုရွှဲနေတဲ့ စောက်ရည် ကြည်တွေကို လျှာနဲ့ တပြတ်ပြတ်မြည်အောင် ရက်ပေးနေ ပြန်တယ်။ တကယ့်ကို ရက်ရက်ရောရော ရပ်ပေးနေတာ ကျမအဖို့ အရမ်းကိုငြိမ်ပြီး အရမ်းကို ကောင်းနေရတာပါဘဲ။ အဖုတ်ကိုရက်ပေး စုပ်ပေးတာထက် ပိုထိတာပေါ့ စောက်ပတ်ထဲကို လျှာကိုထိုးထိုးပြီး လိုးနေတဲ့သဘော ဖြစ် နေတာကိုး ..။ အား ပါးပါး ဟင်း .. ထိုးစမ်းပါ ကိုစိုးရ ဟင့် မွှေပေးစမ်းပါ .. အား ကောင်းလိုက်တာ ဟင်းဟင်း .. ကျမ စောက်ပတ်ထဲကို ရှင့်လျှာကြီး အကုန်ဝင်အောင် ထိုး သွင်းပေးစမ်းပါ။
ဟုတ်တယ် လီးနဲ့က ပိုပြီး အရသာကောင်းစေမှာ .. ကိုစိုးရယ် .. ကျမကို လိုးပါတော့ရှင့်လီးကြီးကို ကျမစောက်ပတ်ထဲ ထိုးသွင်းပေးစမ်းပါ။ လုပ်ပါကိုစိုးရယ် ကျမကို လိုးပေးစမ်းပါရှင် .. ကျမ အပေါက်ထဲကို ရှင့်အ ချောင်းကြီး တအားကုန်ဆောင့်လိုးသွင်းလိုက်စမ်းပါ။ ကျမ ခံချင်နေပြီ။ ဘယ်လိုမှ မနေနိုင်တော့ဘူး လိုးပါကိုစိုးရယ် လိုးစမ်းပါရှင် .. ကျမက ထုတ်ဖေါ် တောင်းဆိုလိုက်မိပါတယ်။ အရမ်းကို လိုးချင်နေပြီကိုး ရှက်မနေတော့ပါဘူး ပြီးတော့ စိတ် တူ ကိုယ်တူ လိုးကြတာဘဲ။ ဇေယျာစိုးကလဲ ကျမလိုဘဲ ထန်နေတပါတယ်။ အ ဖုတ်ရက်ပေးတာကို ချက်ခြင်းရပ်ပြီး ကျမကိုယ်ပေါ် တက်ခွတယ်။ တက်ခွတယ်ဆိုတာနဲ့ ကျမက သူ့လီးကို ဆွဲယူပြီး နီရဲပြဲလန်နေတဲ့သူ့လီးထိပ်ဖူးကြီးကို စောက်ရည်ကြည်တွေ နဲ့ စိုရွှဲမို့ဖေါင်းကြနေတဲ့ စောက်ဖုတ် အ၀မှာ တေ့ပေး လိုက်ပါတယ်။ စိတ်က အရမ်းထနေတဲ့ ဇေယျာစိုးဟာ ကျမကတေ့ပေးလိုက်တာနဲ့ ဖိချထိုးသွင်းလိုက်တာ တစ်ချက်တည်း နဲ့ သူ့လီးချောင်းကြီး တစ်ချောင်းလုံး စောက်ဖုတ်ထဲကို တနင့် တပိုးဝင်သွားတော့တာပါဘဲ။ သူ့လီးက မသေးပါဘူးရှင်။
ရှစ်လက်မသာသာလောက် ရှည်ပြီး ကျပ်လုံးလောက် ကိုတုတ်တာ ..။ တစ်ချက်တည်း အဆုံးဖိသွင်းလိုက်တော့ အဖုတ် ထဲမှာ စေးပိုင်တင်းကြပ်သွားတာဘဲ။ ဖိန်းရှိန်းပြီး ကြက်သီး ထသွားရအောင်လဲ ကောင်းတယ်။ ကျမပါးစပ်က အိုး .. ကျွတ်..ကျွတ်.. ကျွတ် လို့ စုပ်သပ်ညည်းလိုက်မိတယ်။ နာတာကြောင့် ညီးတာလား ကောင်းတာကြောင့် ညီးတာလား ကျမကိုယ် ကျမတောင်မခွဲခြားတတ်တော့ပါ ဘူး နာလဲနာ ကောင်းလဲအရမ်းကောင်းနေတာကိုး။ လီးအဆုံးဝင်သွားပြီးတာနဲ့ ဇေယျာစိုးဟာ ကျကို စပြီးလိုးပါတော့တယ်။ အစပိုင်းမှာတော့ ခပ်ဖြေးဖြေး တချက်ခြင်း ညောင့် လိုးပေးတာ။ သူ့လီးအဖုတ်ထဲ တိုးဝင်လာတိုင်း ကျမက အိုး ကနဲ ဟင် ကနဲ ပါးစပ်က အသံထွက်မြည်တမ်းနေမိတယ်။ လီးထွက်သွားတယ်။ နောက်ပြန်ဝင်လာတယ်။ ၀င်နေတဲ့လီးကို ထုတ်ယူတယ်။ နောက်ပြန်ထိုး သွင်းတယ်။ထွက်လိုက် ၀င်လိုက် ၀င်လိုက် ထွက်လိုက်နဲ့။ သူ့လီးက ရှစ်လက်မကျော်ကျော် ရှည်တာဆိုတော့ အဆုံးထိုးသွင်းလိုက်တဲ့အခါ သားအိမ်ကို ဒစ်ကြီးနဲ့ ထိထိ နေတယ်။
အဲဒီလိုသားအိမ်ထဲကို စိုက်ဝင် ထိမိတာကလဲ အောင့်အောင့်သွားပေမဲ့ အရသာတမျိုးထူးတယ်ရှင်။ အလိုး ခံရတိုင်းသားအိမ်ကို ထိတာမျိုးမှ မဟုတ်တာ။ လီးရှည်မှသာ သားအိမ်ထဲထိ စိုက်ဝင်တာ။ ဇေယျာစိုးရဲ့လီးကလဲ အလုံးက တော်တော်တုတ် တာမို့ စောက်ခေါင်းထဲက အတွင်းသားတွေကိုလဲ သိပ်သိပ် သည်းသည်းနဲ့ ပြည့်ပြည့်၀၀ ပွတ်တိုက်မိတယ်။ ပြီးတော့ သူ့လီးထိုးသွင်း ပြန်ထုတ်လုပ်တာကလဲ လမ်းကြောင်းမှန်တယ်။ အ၀င်မှာရော အထွက်မှာရော လီး တန်လုံးပတ် အပေိးု့င်းက ကျမစောက်စေ့ကို ကျကျနန ပွတ် တိုက်နေတယ်လေ။ ကျမဟာ တကယ့်ကို ရာနှုံးပြည့် ပြည့်ပြည့်၀၀ အလိုးခံနေရတာပါ။ မစို့မပို့ မဟုတ်ဘူး ထိထိမိမိ စီးစီးပိုင်ပိုင်နဲ့ နင့်နင့်ပိုးပိုးကြီးပေါ့။ ဒါကြောင့်လဲ ကျမဟာ တကိုယ်လုံးကို သူ့လက် ၀ ကွက်ပြီးပုံအပ်ထားလိုက်တာဘဲ။ သူ့စိတ်ကြိုက် လုပ်ချင်ရာ လုပ် လိုးချင်သလိုလိုးပေတော့။ ကျမစိတ်တွေ ပိုထန်လာသလို ကျမတို့ နှစ်ယောက် စလုံးရဲ့ လှုပ်ရှားမှုတွဟာလဲ ပြင်းထန်လာပါတယ်။ သူက ညောင့်နေတာကနေ မြန်မြန်သွက်သွက်နဲ့ အားပြင်းပြင်းဆောင့်ပြီး လိုးလာပါတယ်။
ကျမကလဲ သူ့ဆောင့်ချက်တွေနဲ့ အံကိုက်ဖြစ်အောင် အောက်ကနေ ကော့ကော့ပေးတယ်။ အရှိန်နဲ့ဝင်လာတဲ့လီးကြီး အဖုတ်ထဲကို နက်နက် ရှိုင်း ရှိုင်း အဆုံးဝင်နိုင်အောင် ပေါင်ကိုဖြဲပေးတာမျိုးကိုလဲ အ ချိန်အဆမိမိလုပ်ပေးတယ်။ ဇေယျာစိုးရဲ့ အသက်ပြင်းပြင်း ရှူသံတွေ ကျမရဲ့ ညီးညူမြည်တမ်းသံတွေဟာ ပဲ့တင်ထပ်လို့နေပါတယ်။ ဒီအသံ တွေဘဲလားဆိုတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ လိုးနေကြတဲ့ အသံဗလံ တွေလဲ ပါတာပေါ့။ သူ့ဆီးစပ်နဲ့ ကျမဆီးစပ် ရိုက်မိကြတဲ့ အသံတွေက တဖတ်ဖတ် သူ့ဂွေးအုကြီးတွေ ကျမဖင်ဆုံကြီးကို ထိရိုက်မိ တဲ့ အသံကလဲ တပြတ်ပြတ် စောက်ရည်ကြည်တွေ အတော် ဘဲ စိုရွှဲနေတဲ့ ကျမရဲ့ စောက်ခေါင်းထဲကို သူ့လီးချောင်း ကြီးက တရှိန်ထိုးဆောင့်သွင်းလိုက်တဲ့ အသံက တဘွပ်ဘွပ်။ အဲဒီအသံပေါင်းစုံ ရောနှောပေါင်းစည်းထားတဲ့ ကာမ တေးသံသာက ကျမတို့ရဲ့ ကာမစပ်ယှက်ပွဲကြီးကို ပိုပြီး အသက်ဝင်စေပါတယ်။ ဒီအသံတွေကြားနေရတာကလဲ ကျမတို့ နှစ်ယောက်စလုံးအတွက် ပိုပြီး စိတ်ကြွစရာပေါ့။ ပိုပြီးအရသာတွေ့စရာပေါ့။
ဆောင့် .. ဆောင့် ကျမကို တ အားဆောင့်လိုးစမ်းပါရှင် .. ဟင်း . ဟင်း .. ရှင့်လီးကြီး တစ်ချောင်းလုံး လအုပါ မြုပ်ဝင်သွားအောင် အားပြင်းပြင်း နဲ့ ဆောင့်သွင်းလိုက်စမ်းပါရှင် .. ခံလို့ ကောင်းလွန်းလို့ပါ ဘွတ်..ဘွတ်.. အား ဟုတ်ပီ .. အဲလိုမျိုး .. အဲလိုမျိုး ဆောင့် သာဆောင့် . .အဖုတ်ကွဲချင်ကွဲပါစေ .. အမလေး.. ကောင်းလိုက်တာရှင် .. အား .. ကျမလေ အားပြင်းပြင်းနဲ့ ထိမိတဲ့ သူ့ဆောင့်ချက် တွေကို ရင်သိမ့်တုန်အောင် ခံရင်း တစ်ချီပြီး တချီ ဆက် တိုက်ကို ပြီးနေတာဘဲ။ တချို့ယောက်ျားတွေနဲ့ ဆိုရင် တချီကောင်းလောက်သာ ပြီးခဲ့တဲ့ ကျမ အခု ဇေယျာစိုးလိုးတာခံရတော့မှ ဆက် တိုက်ပြီးတဲ့အရသာကို တုန်ခါမောဟိုက်အောင် ခံစားနေရ ပါတယ်ရှင်။ ကျမလေးချီမြောက်ပြီးသွားတဲ့ အခါမှာ ဇေယျာစိုး ဟာလည်း တရှူးရှူးနဲ့ အသက်ရှူ အရမ်းမြန်လာတယ်။ ဇေယျာစိုးရဲ့ ဆောင့်လိုးချက်တွေကလဲ ဘာကြမ်း သလဲ မမေးနဲ့။ တဘွပ်ဘွပ်နဲ့ စက်သနပ်ပစ်တာထက် တောင် မြန်နေသေးတယ်။ သူလဲ အရည်တွေထွက်ဖို့ နီးနေပြီဆိုတာ ကျမလဲသိတယ်။ ကျမကို လေးချီ ဆက်တိုက်ပြီးအောင် လိုးပေးနိုင် တဲ့သူ့လီးအစွမ်းတော့ ကျမ အရမ်းချီးမွမ်းမိပါတယ်။
သူ့အတွက်အရသာ ပိုကောင်းအောင် လုပ်ပေးချင် တဲ့ ဆန္ဒကြောင့် ကျမဟာ သူ၏လုံးလုံးကျစ်ကျစ်လေးကို အသာလက်နဲ့ပတ်ကျော်ပြီး သူ့ဂွေးအုတွေကို ညာလက်နဲ့ အ သာလှမ်းကိုင်လိုက်တယ်။ ပြီးတော့ အသာဖွဖွလေး ဆုတ် နယ်ပေးတယ်။ ပွတ်ပေးတယ်။ ဒါဟာ ယောက်ျားတွေ သိပ်ကြိုက်တဲ့ လုပ်ဆောင်ပြုစုပေးမှုလေးတစ်ခုပေါ့။ ဇေယျာစိုးဟာ ပိုပြီး အရသာတွေ့သွားတာ သေချာ ပါတယ်။ အသက်ရှူပိုမြန်လာသလို ဆောင့်လိုးချက်တွေ ကလဲ ပိုအားကောင်းပြီး ပိုကြမ်းလာတယ်။ နောက်တော့ သူ့လီး ကြီး ငေါက်ကနဲ ငေါက်ကနဲ လှုပ်ရှားသွားတာကို ကျမသိရတယ်။ သူ့လရည်တွေ ပန်းထုတ်တော့မယ်။ ကိုစိုး .. လရည်ထွက်ရင် ကျမစောက်ပတ်ထဲမှာ ဘဲ ပန်းထုတ်ပေးနော် အဖုတ်ထဲမှာလရည်တွေ ပြည့်လျှံ သွားအောင်ကို ပန်းထည့်ပေးပါ နော် .. နော် .. ကျမက ပါးစပ်ကလဲ ပြော စောက်ဖုတ်ကိုလဲ ညှစ် သူ့လီးကိုလဲ စုပ်ယူလိုက်တယ်။ အဲဒီအချိန်မှာဘဲ သူပလီးထဲက သုတ်ရည်တွေ ပန်းထွက်လာပါလေရော။ ပူပူနွေးနွေး အရည်တွေ စောက်ဖုတ်ထဲ ပြန့်နှံ့သွားတာကို ကျမခံစားသိရှိလိုက်ရပါတယ်။
သူ့သုတ်ရည်တွေကများလိုက်တာ မပြောပါနဲ့တော့ ပန်းထွက်လာ တာ မနဲဘူး စောက်ဖုတ်ထဲ ပြည့်ရုံမကဘူး အပြင်တောင် လျှံထွက်တယ်။ အဖုတ်ထဲ သုတ်ရည်တွေ အားကောင်းကောင်းနဲ့ ပန်းထည့်ပေးလိုက်တာမို့ ကျမလဲ ငါးကြိမ်မြောက်ပြီးသွား ပါတော့တယ်။ အဲဒီငါးကြိမ်မြောက်ပြီးတာဟာလဲ တကယ့်ကိုထိတယ်။ တကိုယ်လုံး ခွေပျော့နုံးလျှသွားစေလောက်အောင် ကို ဖြစ်သွားရတာ။ စောက်ရည်တွေ ထွက်တာကလဲ အရမ်းဘဲလေ ..။ ဒီနောက်တော့ ဇေယျာစိုးလဲ ငြိမ်ကျသွားတယ်။ လိုးပွဲကြီးက တစခန်းသတ်ပြီပေါ့။ သုတ်လွှတ်ပြီး မကြာခင်မှာဘဲ သူ့လီးက ပျော့ခွေ သွားတယ်။ ဇေယျာစိုးဟာ ကျမစောက်ဖုတ်ထဲက သူ့လီးကို ဖြုတ်ယူပြီး အသာဘေးကို လှိမ့်ဆင်းသွားတယ်။ ပက်လက် စင်းစင်းကြီးအိပ်ရင်း အသက်ပြင်းပြင်းရှူနေတယ်။ သူက အ၇မ်းကိုမောဟိုက်သွားတာပါဘဲ။ သူက ပိုအားစိုက် လှုပ်ရှားလိုးဆောင့်ပေးခဲ့ရတာကိုး ..။ ခဏကြာတော့ ကျမ နည်းနည်း အမောပြေသွား ပါတယ်။ ဒီအချိန်မှာ ကျမဟာ လှဲအိပ်နေရာကထပြီး သူ့ခြေရင်းဘက်ကိုသွားပါတယ်။ သုတ်ရည်တွေ စောက်ရည်တွေ ပေကျံနေတဲ့ သူ့လီးကို ပါးစပ်နဲ့ အသာစုပ်ပေးတယ်။
သန့်စင် သွားအောင်လည်း လျှာလေးနဲ့ အသာယက်ပေးလိုက်တယ်။ ဇေယျာစိုးဟာ လီးစုပ်ပေး ယက်ပေးနေတဲ့ ကျမကို တချက်ပြုံးပြီးကြည့်တယ်။ နောက်တော့ မျက်စိကို အသာမှိတ်ပြီး ဇိမ်နဲ့ မှိန်းနေတယ်။ သူ့လီးကို သန့်သွားအောင် စုပ်ပေး ရက်ပေးပြီးတော့ ကျမက သူ့ဘေးမှာ အသာပြန်လှဲလျောင်းလိုက်တယ်။ သူ့ရင် ခွင်ထဲမှာ ခေါင်းလေး တင်လို့ပေါ့။ ဇေယျာစိုးက ကျမရဲ့ ကိုယ်လုံးလေးကို အသာ လက်တဖက်နဲ့ သိုင်းဖက်တယ်။ ကျန်တဲ့လက်တဖက်ကတော့ ကျမ ပေါင်ကြားက စောက်ဖုတ်ပေါ် အသာအုပ်ပြီးတင်လိုက် တယ်။ ပြီးတော့ စောက်ဖုတ်ကို အသာညှစ်လိုက်တာ စောက်ဖုတ်ထဲက သုတ်ရည်နဲ့ စောက်ရည်ကြည်ရောနေ တာတွေ အပြင်ကို ယိုစီးကျလာတော့တာပါဘဲ။ ခဏလောက်နားနေကြပြီးတဲ့နောက် ဇေယျာစိုး ဟာ ကျမပါးစပ်ကို သူ့ပါးစပ်နဲ့ တေ့ကပ်ပြီး စုပ်နမ်းပြန်တယ်။ ရှာကိုလဲ ကျမပါးစပ်ထဲထိုးထဲ့ပြီး ကလိတယ်။ ကျမက တုံ့ပြန်နမ်းပြီး သူ့လီးကို လက်နဲ့အသာကိုင် စမ်းကြည့်တော့ ဟော .. သူ့လီးကြီး မတ်တောင်နေတာ ပါဘဲလား။
ကျမဖြင့် ယုံတောင် မယုံချင်သလိုဘဲ ကျမ တွေ့ ဖူးသမျှယောက်ျားတွေကတော့ သုတ်လွှတ်ပြီးသွားရင် လီးလဲ ပျော့ လူလဲ နုံးခွေကျသွားတာပါဘဲ လီးပြန်တောင်လာတဲ့ လူ မတွေ့ဖူးသေးဘူး။ ဇေယျာစိုးရဲ့လီးကတော့ ခဏအနားယူပြီးတာနဲ့ ပြန်တောင်လာပြီး တောင်တာမှ မတ်ကိုနေတာ။ ကျမအဖို့ ကော်ပေါက်ဘဲပေါ့။ တစ်ချီဆက်ပြီး လိုးနိုင်တော့မှာကိုး။ ဟောတော့ .. ရှင့်လီးကြီး ပြန်တောင်လာပါ ရောလား.. ကျမက အံ့သြ၀မ်းသာစိတ်နဲ့ ရေရွတ်လိုက်မိတယ်။ ဟုတ်တယ် တောင်လာပြီ လီးတောင်တော့ ဆက် လိုးကြတာပေါ့ မ၀င်းမေလဲ အလိုးခံနိုင်သေးတယ် မဟုတ်လား.. ခံမယ် .. ဘာလို့ မခံနိုင်ရမှာလဲ ရှင်လိုးနိုင်တယ်ဆိုရင် ကျမကတော့ အဆင်သင့်ဘဲ .. ဟုတ်ပြီ .. ဒါဆိုရင် လေးဖက်ထောက်ပြီးကုန်းပေး.. ရတယ် .. ကျမလဲ သူပြောသလို ချက်ချင်းကုန်းပေးလိုက်ပါ တယ်။ စောစောကလိုးထားတာကြောင့် ကျမအဖုတ်က အရည် ရွှမ်းပြီးသားပါ။ ကျမက လေးဘက်ထောက် ကုန်းပေးပြီးတဲ့အခါ ဇေယျာစိုးက ကျမဖင်ကြီးနောက်မှာ နေရာယူလိုက်ပါတယ်။ ပြီး တော့ ကျမရဲ့ဖင်သားကြီးနှစ်ခြမ်းကိုဆွဲဖြဲပြီး ဖင်ပေါက်ပေါ် ကို တံတွေးထွေးလိုက်ပါတယ်။
အို.. ဟင့် . ကိုစိုး ဘာလုပ်အုံးမလို့လဲဟင် ဖင်ပေါက်တဲ့တဲ့ တံတွေးထွေးချတာခံထားရတာကြောင့် ကျမ ခါးလေးတွန့်သွားပြီး ညုတုတုနဲ့ မေးလိုက်မိ ပါတယ်။ ဘာအတွက်နဲ့ ဖင်ပေါက်ကို တံတွေးဆွတ်တယ် ဆိုတာကိုတော့ ကျမသိပါတယ်။ ဖင်လိုးမလို့ဆိုတာကိုပေါ့။ မ၀င်းမေ ဖင်ကြီးက ဖြူဖွေးအိပြီး အယ်နေတာ ဆိုတော့ ကျနော် ဖင်လိုးချင်လာလို့ပါ .. မ၀င်းမေ ဖင်ခံမယ် မဟုတ်လား ရှင် လိုးချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ကျမခံပါ့မယ် သိပ် တော့ မကြမ်းနဲ့နော် ရှင့်လီးကြီးက အရမ်းကြီးတာဘဲ တအားဆောင့်ရင် ကျမဖင်ကွဲသွားမှာပေါ့ .. စိတ်ချပါ မ၀င်းမေရဲ့ နာအောင် ကျွန်တော် မလုပ် ပါဘူး အရသာတွေ့ပြီး ကောင်းကောင်းဘဲ လုပ်ပေးမှာပါ ပြောပြောဆိုဆို ဇေယျာစိုးက ကျမစအိုဝမှာ သူ့လီး ကိုထောက်လိုက်ပါတယ်။ ပြီးတော့ ဖိထိုးသွင်းလိုက်တာ လီးက ထစ်ပြီးအထဲကို တိုးဝင်လာပါတယ်။ အား . ကျွတ်..ကျွတ်.. ဖြေးဖြေးသွင်းရှင့် .. နာတယ် .. စအိုဝပြဲအာသွားတာကြောင့် ကျိန်းစပ်ပြီး နာကျင်လှလို့ ကျမညီးလိုက်မိပါတယ်။ ဖင်လိုးတဲ့အခါ လီးစသွင်းသွင်းချင်း နာတာကတော့ ထုံးစံပါဘဲ ကျမ နားလည်ပါတယ်။
ဒါကြောင့်လဲ ဒူးခေါင်းကို အားပြုပြီး ဖင်ဆုံကြီးကို အသာကော့ပင့် ပေးထားလိုက်ပါ တယ်။ ဖင်လိုးခံဖူးတာကြောင့် ကျမဟာ ဖင်ပေါက်ထဲ လီးအ၀င် အဆင်ပြေအောင် လမ်းကြောင်းပွင့် ပေးတတ်နေ ပါတယ်။ ဇေယျာစိုးကလဲ သူ့လီးကြီးကို ဆက်ပြီး ဖိထိုးသွင်းလိုက်တယ်။ ကျဉ်းကျဉ်းကြပ်ကြပ်နဲ့ဘဲ သူ့လီးတစ်ချောင်းလုံး ကျမဖင်ထဲအဆုံးဝင်သွားပါလေရော။ အဲဒီတော့ ဇေယျာစိုးက ကျမရဲ့ ဖင်သားကြီးနှစ် ခြမ်းကို လက်နှစ်ဖက်နဲ့ ခပ်တင်းတင်း ဆုတ်ကိုင် ဖျစ်ညှစ်ပြီး သူ့လီးကြီးကို ကျမဖင်ထဲက ဆွဲထုတ်လိုက် ပြန်ဖိ ဆောင့် သွင်းလိုက်နဲ့ ကျမကို ကောင်းကောင်း ဖင်ဆော်နေပါတော့ တယ်။ နာတာကတော့ သိပ်ကို နာတယ်ရှင့်။ ကောင်းတာ ကလဲ အသဲခိုက်မတတ်ပါဘဲ။ ကျမဟာ တညီးညီး တအားအား အော်ဟစ် ညီး တွားရင်း ဇေယျာစိုးရဲ့ဖင်လိုးတာကို ခံနေပါတယ်။ သူဟာ ဖင်လိုးတဲ့အခါမှာလဲ လီးကို အဆုံးဖိဆောင့် သွင်းတယ်ရှင့်။ ဖင်လိုးခံရတာဟာ နာကျင်မှုနဲ့ မူတ ထူးကဲစွာ ကောင်းလှတဲ့ အရသာကို ရောပြန်းထားတဲ့ ကာမအရသာ တစ်မျိုးကို ခံစားနေရပါတယ်။ မကြာပါဘူး၊ကျမလဲ ရမက်စိတ်တွေ အရမ်းဝင် လာရပါတယ်။
နာတာကို အရေးမစိုက်နိုင်တော့ပါဘူး ဖင်ကြီးကို ကော့ပေး၊ ဘယ်ညာဝှေ့ယမ်းလုပ်ပေးပါတယ်။ ဇေယျာစိုးကလဲ ကျမနို့အုံကြီးတွေကို လှမ်းဆွဲလိုက် စောက်ပတ်ကိုထိုးနှိုက် ကလိလိုက်နဲ့ လီးကိုလည်း ကျမ ဖင် ပေါက်ထဲကို အားပြင်းပြင်းနဲ့ ခပ်ကြမ်းကြမ်းဘဲ ဆောင့်လိုး သွင်းနေပါတယ်။ ဖင်လိုးခံရမှုကြောင့် ကျမရဲ့ အဖုတ်ထဲက ယားလာပြီး နှစ်ချီဆက်တိုက်ပြီးသွားရပါတယ်။ ကျမ ဒုတိယအချီ အပြီးမှာ ဇေယျာစိုးလဲ ကျမဖင်ဆုံကြီးနောက်မှာ လှုပ်လှုပ် ခါခါနဲ့ ဆန့်ငင်ဆန့်ငင်ဖြစ်သွားပြီး ကျမ ဖင်ခေါင်းပေါက်ထဲကို ပူနွေးပျစ်ခဲတဲ့ သုတ်ရည်တွေ ပန်းထည့်ပေးလိုက်ပါတော့ တယ်ရှင် မြက်ခင်းပေါ်တွင် နှစ်ယောက်သား ၀မ်းလျှား မှောက်ရက်သား ဇေယျာစိုးနှင့် မ၀င်းမေတို့သည် မှိန်း၍ နေကြသည်။ ဇေယျာစိုး၏ လီးကြီးကတော့ သူမ၏ စအိုထဲ မှ မချွတ်သေးဘဲ တန်းလန်းကြီးဖြစ်သည်။ ခဏကြာတော့ ဇေယျာစိုးက မ၀င်းမေ၏ နားနားသို့ သူ၏ပါးစပ်ကို ကပ်၍ တိုးတိုးလေးပြောလိုက်သည်။ မ၀င်းမေ ကျနော့်တို့ဘေးက ခြုံစပ်မှာ ခင်မေ ရောက်နေတာကြာပြီ။ စောစောထဲက ကျနော်မြင်တယ်။
ကျ နော်နဲ့လက်တကမ်းဘဲ အဲဒါ ဘယ်လိုလုပ်မလဲ မ၀င်းမေက ချက်ခြင်း အဖြေမပေးသေးချေ။ သူမကို ပြောလိုက်သော ဇေယျာစိုးက ဘာကို ရည်ရွယ်သည် ဆိုတာကိုတော့ရိပ်မိလိုက်သည်။ ဒါ့အပြင် မ၀င်းမေ၏ စိတ်ထဲ တွင်လဲ ညီအမနှစ်ယောက်အတူတူ အလိုးခံရရင်ကောင်း မည်ဟုစဉ်းစားမိလိုက်သည်။ ရှင် သူ့ကို လိုးချင်လို့လား ပါးချင်းကပ်၍ တိုးတိုးလေးပြောနေကြခြင်းဖြစ်သည်။ အင်း .. ဒါဆိုရင် လှမ်းဆွဲလိုက် ကျမကိုလဲ သူနဲ့တူတူ လိုးပေးရအုံးမှာနော် .. အင်းပါ .. ပြောပြီးသည်နှင့် ဇေယျာစိုးက မ၀င်းမေ၏ ကျော ပြင်ပေါ်တွင် တပ်ရက်သားဖြစ်နေရာမှ ဘေးသို့ ရုတ်တရက် ပက်လက်လှန်ချလိုက်ပြီး တဆက်တည်း သူ၏ ကိုယ်လုံးကို ဘေးမှခြုံဆီသို့ တပတ်လှိမ့်လိုက်ကာ ခင်မေ၏ လက်ကိုဆောင့် ဆွဲလိုက်သည်။ အမလေး . အင့် .. ခင်မေ၀င်း ကိုယ်လုံးလေးက ဇေယျာစိုး၏ ကိုယ်ပေါ် သို့ မှောက်ရက်သားကျ၍လာသည်။ ဇေယျာစိုးက သူမကို ဖက်ပြီး တပတ်မျှ မ၀င်းမေဘေးသို့ လှိမ့်လိုက်ရာ ခင်မေက ဇေယျာစိုး၏ အောက်ဖက် မ၀င်းမေ၏ ဘေးတွင် ပက်လက် လှန်ရက်သားဖြစ်သွားသည်နှင့် သူမကိုလက်ဖြင့် ဖိ၍ ဇေယျာ စိုးက ကြုံး၍ထလိုက်လေသည်။
ဒီအချိန်မှာပင် မ၀င်းမေကလဲ ကြုံး၍ ထကာ ခင် မေကို ချုပ်နှောင်ပေးလိုက်သည်။ မလုပ်ကြပါနဲ့ ဖယ်ကြပါ သနားပါအုံး အမှန်တော့ လည်ဂျာစာအုပ်ပြန်ယူပြီး သူမတို့ နောက်သို့လိုက်လာသော ခင်မေသည် ဇေယျာစိုးနှင့် မ၀င်း မေတို့ရှိရာသို့ စောစောကထဲက ရောက်နေခဲ့သည်ဖြစ်သည်။ လယ်ဂျာစာအုပ်က မ၀င်းမေ၏ စိုက်ခင်းရှိ အိမ်တွင် သွား၍ ယူရခြင်းဖြစ်သဖြင့် ခရီးလည်းကျွမ်းပြီး မြင်းစီးလဲ ကျွမ်းသော ခင်မေအဖို့ သိပ်ပြီး မကြာလိုက်ချေ။ ခင်မေတစ်ယောက် စမ်းချောင်းလေးနား ရောက် လာပြီး မ၀င်းမေ၏ မြင်းကို တွေ့သည်နှင့် အသာဆင်း၍ ကြည့်ရာ ဇေယျာစိုးနှင့် မ၀င်းမေတို့ နှစ်ယောက်ဖြစ်ချင်တိုင်း ဖြစ်၍နေသည်ကိုတွေ့မြင်လိုက်ရသည်။ တခါ အလိုးခံထားခဲ့ဘူးပြီဖြစ်သော လီးအရသာကို သိနေပြီဖြစ်သော ခင်မေသည် ဇေယျာစိုးနှင့် မ၀င်းမေတို့ လိုးကြတာကို ကြည့်ပြီး မခံမရပ်နိုင်လောက်အောင်ပင် ကာမ စိတ်တွေကြွခဲ့ရသည်ဖြစ်သည်။ ဒါကြောင့်လဲ ခင်မေက မ၀င်းမေတို့နှင့် အနီးဆုံး ခြံအကွယ်လေးဆီသို့ တိုးကပ်သွားပြီး အနီးကပ်ကာ အသေ အချာကြည့်ခဲ့သည်။
ထို့နောက် မနေနိုင်လွန်းတော့သဖြင့် သူမ၏ စကပ်ကိုလှန် ပေါင်နှစ်လုံးကို ကားပြီး စောက်ခေင်းထဲသို့ လက်ညှိုး ထည့်၍ မ၀င်းမေ အားရပါးရအလိုးခံနေသည်ကို ကြည့်ကာ လက်ညှိုးကို စောက်ခေါင်းထဲသို့ ထုတ်ချီ သွင်းချီ လုပ်ရုံမျှ မက မွှေ၍ပင်ပေးခဲ့ပြီး တစ်ချီပင်ပြီးခဲ့ရသည်။ သူမ၏ အမကို လိုးနေသော ဇေယျာစိုး၏ လီးကြီးကိုလဲ ပြေးဆွဲ၍ သူမ၏ စောက်ပတ်ထဲသို့ ထိုးထဲ့ ချင်စိတ်တွေက တချိန်လုံးပြင်းပြ၍နေခဲ့ရသည်။ အခု တကယ်လုပ်တော့မည်ဆိုတော့လဲ အမဖြစ် သူ၏ရှေ့တွင်ဖြစ်နေတော့ ခင်မေခမျာ ထိတ်လန့်၍ နေရသည်။ အမဖြစ်သူက သူမကို ချုပ်ပေးထားစဉ်မှာပင် ဇေယျာစိုးက ခင်မေ၏ ကိုယ်ပေါ်မှ အ၀တ်အစားတွေ အား လုံးကို ချွတ်လိုက်ပေပြီ။ ဟာ ခင်မေ စောက်ပတ်ကြီးက မို့ပြီး ဖေါင်းကားနေတာဘဲနော် လိုးလို့ သိပ်ကောင်းမှာဘဲ တနှာသံဖြင့် မ၀င်းမေက ရီဝေစွာပြောသည်။ ဟာ ကောင်းတာပေါ့ မ၀င်းမေရာ အမ စောက် ဖုတ်က လိုးလို့ကောင်းသလို ညီမ စောက်ဖုတ်ကလဲ လိုးရတာ အရသာသိပ်ရှိတာဘဲ ဟင် .. ကိုစိုး လိုးဖူးလို့လား မ၀င်းမေက အံ့သြစွာပြောသည်။
လိုးဘူးတာပေါ့ .. အို ကနဲ ဖြစ်ကာ ခင်မေ တစ်ယောက် မျက်လုံးနှစ်လုံး စုံမှိတ်လိုက်သည်။ ဘယ်တုံးက လိုးလိုက်တာလဲ ကိုစိုးရ နေ့ခင်းကဘဲ သိပ်အရသာရှိတာဘဲ မ၀င်းမေရာ ညီမလေး စောက်ဖုတ်ကို ကျမရက်ပေးမလို့ ကိုစိုးရ .. အေး .. ရက် ရက် ပြီးရင် မ၀င်းမေကို လိုးပေးအုံးမယ် .. မ .. မ လုပ်ပါနဲ့ .. ဟင့် .. ဟင့် .. ဇေယျာစိုးနှင့် မ၀င်းမေတို့ ရမက်ကြဖွယ်ရာ အပြန် အလှန်ပြောနေကြသည့်စကားသံများ အကြားတွင် ခင်မေ၏ တောင်းပန်သံလေးက ထွက်ပေါ်၍ လာသည်။ တွေ့ကြုံရတော့မည့် အဖြစ်ကို အလွန် ရှက်ကြောက် နေသော်လဲ မိမိ၏ စိတ်များ ပို၍ ထကြွကာ သောင်းကျန်း ၍ လာရသည်ကိုတော့ ခင်မေသည် သူမကို သူမ သတိ ထားမိသည်။ ရက်ပေးခြင်းမခံရမှီကပင် စောက်ဖုတ်သည် ဖေါင်း၍ တက်လာကာ အရည်ကြည်များထွက်ကျ၍ လာရသည်။ သည်လို စိတ်လှုပ်ရှား ရမက်ဇော ထန်လာရ သည့် မိမိ၏ကိုယ်ကို ခင်မေသည် လတ်တလော မုန်းတီး မိသည်။ ရမက်ဇောမထရလေအောင်လဲ အတင်း ချိုးနှိမ် ထားရသည်။ ဒါပေမဲ့ မရနိုင်ပါ..။
ဒီအချိန်မှာဘဲ .. ကဲ .. ညီမလေး .. ဘာမှ ရှက်ကြောက်မနေနဲ့ တော့ အားလုံး အကြောင်းသိတွေ ဖြစ်နေကြပြီဘဲ .. လာ မမက ညီမလေးရဲ့ စောက်ဖုတ်ကို ရက်ပေးမယ်နော် .. ပြောပြောဆိုဆို မ၀င်းမေသည် ခင်မေကို သူမ၏ အနားသို့ ဆွဲခေါ်ကာ ပက်လက်လှန်စေလျှက် ဒူးခေါင်းနှစ်လုံးကို ထောင်စေလိုက်ရာ ခင်မေ၏ စောက်ဖုတ်ကြီး သည် ပြဲဟသွားလေတော့ရာ အတွင်း သားနီနီရဲများကို မ၀င်းမေသည် မြင်တွေ့လိုက်ရတော့၏။ ထိုအခါမှ မ၀င်းမေသည် ခင်မေ၏ စောက်ပတ်ကို သူမက လေးဘက်ထောက်လျှက် စတင်ရက်ပေးလေ တော့သည်။ ဟင်း .. ဟင်း.. ဟင်း .. မမ .. ဖြေးဖြေး.. အီး .. အား .. အိုး .. ခင်မေခမျာ စောက်ဖုတ် အရက်ခံရလေသော ကြောင့် သူမ၏ပါးစပ်မှ တအီးအီး တဟင်းဟင်းဖြင့် ညီးညူ နေရရှာလေသည်။ မ၀င်းမေကလည်း အားရပါးရကို ရက်ပေး လေတော့ရာ မ၀င်းမေသည် သူမကိုယ်ကို လေးဘက် ထောက်ကုန်းလျှက်ဖြစ်နေသည်ကို သတိမမူမိပေ။
ထိုအခါမှ ဇေယျာစိုးသည် မ၀င်းမေက သူမ၏ ညီမ စောက်ဖုတ်ကို လေးဘက်ကုန်းလျှက် ရက်ပေးနေသဖြင့် မ၀င်းမေ၏ စောက်ဖုတ်ကြီးသည် နောက်သို့ ပြူးလျှက် ထွက်ပေါ်နေသည်ကိုကြည့်ရင်း စိတ်မထိန်းနိုင်တော့ဘဲ မ၀င်းမေ၏ နောက်မှ နေရယူကာ သူ၏ လီးထိပ်ဖူးကြီးဖြင့် မ၀င်းမေ၏ စောက်ဖုတ်ဝတွင်တေ့ကာ အသာလေးဖိသွင်းလိုက်လေတော့ရာ … ပြွတ် … စွပ် .. ဟူသော မြည်သံဖြင့် လီးထိပ် ဖူးကြီးသည် မ၀င်းမေ၏ စောက်ခေါင်းထဲသို့ ၀င်သွားလေ တော့သည်။ အီး .. အား .. ကိုစိုး .. ဖြေးဖြေးနော် .. နောက်ပြီး ညီမလေးခင်မေကိုလည်း လိုးပေးရအုန်းမှာ နော် .. တော်ကြာ အရမ်းပင်ပမ်းနေအုန်းမယ် .. စိတ်ချပါ .. ကျနော် ဖြေးဖြေးနဲ့ မှန်မှန်ဘဲ လိုးပေးပါမယ်.. ပြောပြောဆိုဆိုဖြင့် ဇေယျာစိုးသည် သူ၏ လီးတန် ကြီးကို မ၀င်းမေ၏ စောက်ဖုတ်ထဲသို့ တစ်ဆုံးတိုင် ထိုးသွင်း လိုက်လေတော့သည်။ ထို့နောက်တွင်တော့ အချက် ငါးဆယ်လောက် သွင်းထုတ်လုပ်ပေးလိုက်ရာ မကြာမီမှာပင် ဇေယျာစိုး၏ လီးတန် ကြီးသည် တင်းမာလာပြီး သုတ်ရေများ ပန်းထုတ်လိုက်ရ လေတော့သည်……ပြီးပါပြီ။
Categorized as အငျးဆကျ Tagged အပြိုဖျေါဝငျစ